'हराएको मानिस' The Story So Far ~ brazesh
July 31, 2020 नयाँ पत्रिका, नयाँ पत्रिका झन् नयाँ, नेपाली, प्रकाशित, हराएको मानिस No comments
धेरै स्नेही पाठकहरूले नयाँ पत्रिकाको मेरो धारावाहिक आख्यान 'हराएको मानिस'को सबै भाग एकै ठाउँमा माग गर्नुभएकोले हालसम्म प्रकाशित २० भाग यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
सहसचिवले निहुरिएर भुईँमा फ्याँकिएको पत्रिकाको मूठो टिपिसकेको थियो । उनीहरु आफ्नो नियमित कुनाको टेबलमा गएर बसे । त्यसको दुबैतिर तीनजना अट्ने लामो बेञ्ची थियो । थापासरलाई थाहा थियो, चाँडै त्यहाँ कोरम पुग्नेछ । टोलका सहकारीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र एकजना डाक्टरसाहब केही बेरमै त्यहाँ आइपुग्छन् । छैठौं सिटमा चाहिँ उनीहरुको उमेरसमूहभन्दा निकै कान्छो एकजना युवा हुन्छ । यी छ जना थापासरका नियमित मध्येका पनि सबैभन्दा नियमित ग्राहकहरु हुन् । एघार बजेसम्म उनीहरुको अखडा त्यहीं हुन्छ । थापासर फटाफट दूधका पोकाहरु च्यात्दै उमाल्ने भाँडोमा खन्याउन थाल्यो । पालैपालो सहकारीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डाक्टरसाप र कलिलो टिठो पनि आइपुगे । उपाध्यक्षले चुरोट सल्कायो सहसचिवले बोकेर ल्याएर टेबलमा राखेको पत्रिका सम्याउन थाल्यो । टोलका अरु केही मानिसहरु पनि आइसकेका थिए । त्यही बेला एउटा अर्को पत्रिकावालाले पनि आफ्नो पत्रिका हु¥याएर गयो । थापासरको चिया पसलमा चारवटै प्रमुख दैनिक पत्रिका आउँछन् । त्यहाँका ग्राहकहरुले आआफ्नो रुचि अनुसारका पृष्ठहरु बाँडेर किस्ताबन्दीमा पढ्छन् । थापा सर आफै चाहिँ कहिले पढ्दैन । उल्लेख्य कुराहरुका बारे ग्राहकहरुले नै यति धेरै टीकाटिप्पणी गरिसकेका हुन्छन्, उसलाई सबै थाहा भइसक्छ । उसलाई ती पत्रिकाहरु भोलिपल्ट समोसा र पकौडा प्याक गर्न काम लाग्छ । थापासरले पहिलो लटको चिया छ वटा ग्लासमा खन्यायो र आफ्ना नियमित ग्राहकहरुको अगाडि लगेर राख्यो ।
	डाक्टरसापलाई मधुमेह छ, चिनी नहालेको ।
	अध्यक्षज्यूलाई कडा चाहिन्छ ।
	सहसचिवज्यूलाई रंग थोरै, बढी गुलियो ।
	अरु दुई जना जस्तो भए पनि केही भन्दैनन् ।
	कलिलो केटोलाई दूध नहालेको चाहिन्छ ।
प्रेमवहादुर ताम्राकार ।
राजेशराज कोइराला, प्रेमवहादुर ताम्राकार, जनकध्वज विष्ट र कमलसिंह परियारका नाममा भिन्नभिन्न पत्रिकामा फरकफरक मानिसले छपाएका चारै वटा फरक सूचनामा तसवीर चाहिँ एउटै मानिसको थियो ।
	आखिर को हो र कहाँ छ त यो चतुर्मुखी ब्रम्हा ?
अन्ततः भरिया काइँलाले आफूभन्दा गह्रुँगो र अचेत मानिसलाई डोकोमा बोकेर त्यत्रो ठाडो र अजंगको पहाड चढ्यो । माथि पुग्दासम्म उसको फोक्सो त खलाँतिजस्तो भइसकेको थियो । उसका पिंडूलाहरु फत्रक्क भएर गलिसकेका थिए । माथि एउटा झ्याम्म परेको रुख थियो जहाँ ऊ सँधै सुस्ताउन रोकिन्थ्यो । तर त्यस दिन उसले त्यो बिसौनी देखेन । त्यसैको छेउमा कटुसको बोटको मुनि मूल फुटेको थियो । ऊ सँधै त्यसको अमृतजस्तो मीठो र स्वादिलो पानी पिएर आफ्नो थकाइ माथ्र्यो । त्यस दिन त झन् उसलाई बेस्मारी तिर्खा लागेको थियो । तर उसले त्यसको पनि वास्ता गरेन । किनभने उसलाई थाहा थियो, उसको डोकोमा भएको अचेत युवकको सास कुनै पनि बेला रोकिन सक्छ ।
उत्सुक भएर बूढा मान्छे पनि उसको पछि लाग्यो । हेर्दाहेर्दै केही बेरमै गाउँका थुप्रै मानिसहरु काइँलाको पछिपछि लागे । गुनगुन गर्दै । हेर्दाहेर्दै उसको पछाडि सानोतिनो जुलुस नै बन्यो । भरिया स्वास्थ्य चौकीमा पुग्यो । उसले डोको बिसायो । भित्रतिर हेर्दै करायो,
हुन त त्यो दुर्गम गाउँको चौकीमा डाक्टर हुँदैनथ्यो । हेल्थ असिस्टेण्ट हुथ्यो । तर पनि सेतो कोट लगाउने, रक्तचाप नाप्ने, स्टेथेस्कोप झुण्डाउने, सानोतिनो चिरफार र चोटपटकको ओखतीमूलो गर्ने मोतीप्रसाद धौभडेल सारा गाउँलेहरुका लागि डाउडर नै थियो । हल्लाखल्ला सुनेर ऊ बाहिर निस्क्यो । काइँला अरु गाउँलेको सहयोगले डोकाबाट घाइते युवकलाई झिकेर सुताउँदै थियो । धौभडेलको आँखा त्यस अचेत युवकमा प¥यो ।
धौभडेलका अनुभवी र अभ्यस्त आँखाले हेर्नासाथै त्यस युवकको अवस्था एकदमै चिन्ताजनक छ भन्ने बुझिहाल्यो । ऊ हतारिएको स्वरमा बोल्यो,
अनि ऊ हतारिंदै भित्र लाग्यो । गाउँलेहरुले युवकलाई झ्याल्टुङ पार्दै उचालेर भित्र लगे । भित्र सानो कोठाको सानो कुनामा भएको एउटा सानै बेडमा उसलाई सुताए । अटाइ नअटाइ अरु गाउँलेहरु पनि भित्र छिरिसकेका थिए । सबै उत्सुक थिए । धौभडेलले युवकको अवलोकन गर्दै अरुहरुलाई भन्यो,
केही बेरमा गम्भीर मुद्रामा धौभडेल बाहिर निस्क्यो । गाउँलेहरुको गुनगुन बिस्तारै मत्थर हुँदै गएर सबै शान्त भए । उनीहरु आँखामा प्रश्नवाचक भाव लिएर धौभडेललाई हेर्न थाले । एउटा बूढाले सोध्यो,
“कसैले बेस्मारी मारपिट गरेको हुनुपछै बिचरालाई । चोटपटक नलागेको कुनै अंग नै छैन । टाउकामा तीन ठाउँमा त टाँका लगाइदिएँ काका । बाहिर देखिएका जति घाउहरु पनि सफा गरिदिएको छु । तर उसको हात गोडा र करङ ठाउँठाउँमा भाँचिएका हुन सक्छन् । हुनेजति पट्टी गरिदिएँ । तर भित्री चोटपटक पनि लागेको छ । रगत पनि निकै बगेको छ । भित्रको रक्तश्राब झनै डरमर्दो हुन्छ । यहाँ हेर्न सकिंदैन । उसको यहाँ अरु उपचार हुन सक्दैन काका । अवस्था एकदमै नाजुक छ । अहिलेसम्मसास त चलिरहेको छ । तर कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्छ । अलि ठूलो अस्पतालमा पु¥याउन सके कुन्नि, नत्र त.......।”
“याँट त मोटर बाटो भेट्नै आठ नौ घण्टा लाग्छ । कसरी पु¥याउनु ठूलो अस्पताल ?”
“हो त । त्याँ माथि घोप्टेडाँडाँ चीलगाडी आथ्यो । कुइरेहरु आका थे नि केके जाति खिच्न ।”
“हो त । तिनैलाई लिन आको हो । जान लाका होलान् ।”
“दुगुर काइँला दुगुर । तिनेरलाई रोक् त गएर । हामी यो मुन्सेलाई ल्याम्दै गर्छम् ।”
काइँलालाई थाहा थियो घोप्टे डाँडो त त्यहीं नजीकै छ । कस्सिएर कुद्यो भने ऊ चीलगाडी उड्नु अघि माथि पुग्न सक्ने सम्भावना छ । ऊ फेरि कुद्न थाल्यो । अरु चारजना बलिया बाङ्गा गाउँलेहरु धौभडेलसंग भित्र गए । उसले त्यस युवकलाई स्ट्रेचरमा हालिदियो । उसले भन्यो,
बलिया गाउँलेहरु उसलाई बोकेर माथितिर लागे । बाटो साँघुरो थियो । ठाडो पनि थियो । धौभडेलले भनेजस्तै सकेसम्म सावधानीका साथ उनीहरु बिस्तारै माथितिर उक्लिन थाले । काइँला चाहिँ उहिल्यै मोड काटेर हराइसकेको थियो ।
संसार पनि बडो अचम्मको छ । यो थरिथरि मान्छेहरु मिलेर बनेको छ । एकातिर ती मानिसहरु थिए, जसले पक्कै त्यस युवकलाई चिनेका जानेका थिए होलान् । त्यसैले ती मानिसहरुले उसको ज्यान लिने नियतले त्यसरी कुटपिट गरेको हुनुपर्छ । अनि अर्को तिर यो गाउँका मानिसहरु । एउटा यस्तो मान्छेको ज्यान बचाउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका थिए जसलाई उनीहरुले चिनेका पनि छैनन् । देउता पनि, राक्षस पनि हामी मानिसहरुकै रुपमा, हाम्रै संसारमा, हाम्रै वरिपरि त घुम्दारहेछन् नि । कसले कुन बेला, कहाँ र कसलाई भेट्छ भन्ने मात्र आ–आफ्नो भाग्यको कुरो हुँदो रहेछ ।
घोप्टे डाँडामा बसेको त्यो एयरबस हेलिकप्टर थियो । त्यसको थाप्लोमा भएको रोटर फनफनी घुमेर तीब्र भइरहेको थियो । पाइलटले ‘इग्निसन अन’ गरेको दुई मिनेट भइसकेको थियो । उसले एकपटक ‘हाइड्रोलिक सिस्टम’ र इन्जिनको तापक्रम लगायतका अरु सबै कुरा ठीक छ कि छैन भनेर पक्का ग¥यो । अब ‘पावर’ साठ्ठी प्रतिशतबाट बिस्तारै बढ्दै थियो । भित्रपट्टि तीनजना ‘कुइरे’हरु बसेका थिए । पाइलटले उनीहरुलाई भन्यो,
ती कुइरेहरु एउटा विदेशी चलचित्रको छायाँकनका लागि स्थलगत निरिक्षण गर्न आएका थिए । घोप्टे डाँडाको माथिपट्टि जहाँ अहिले हेलिकप्टर ओर्लेको थियो, त्यही चौरमा चालीसवटा जति पाल टाँगेर छायाँकन टोली बस्न सक्ने उनीहरुले निधो गरेका थिए । छायाँकन गर्नको लागि उनीहरुले खोजेका जस्तै ठाउँ त्यहाँ वरिपरि फेला पारेको हुनाले उनीहरु खुसी भएका थिए । अबको केही महीनापछि आएर बीस एक्काइस दिन त्यहाँ छायाँकन गर्ने उनीहरुको योजना बनाएर उनीहरु फर्कन लागेका थिए । पाइलट अब हेलिकप्टरलाई उडाउन ठीक्क मात्र के परेको थियो, अचानक उसका आँखा परबाट चौरमा प्रकट भएर त्यतै कुदेर आइरहेको एउटा मान्छेमा परे । त्यो मान्छे दुबै हात हावामा उचालेर केही भन्दै थियो । ऊ जिल्ल प¥यो । उसलाई दोमन भयो । हेलिकप्टरको इन्जिन बन्द गर्नु भनेको फेरि केही समय खेर फ्याल्नु थियो । यो बेला यतातिर मौसमको भर हुँदैन । केही गरी रोकिनु परेछ भने दिनभर फस्न सकिन्थ्यो । तर त्यो मानिस परबाट जुन हिसाबले आइरहेको थियो, वास्ता नगरी उडिहाल्न पनि उसको मनले मानेन ।
उसलाई थाहा थियो, ‘रोटर्स’ पूर्ण रुपले रोकिन दुई मिनेटको हाराहारी लाग्छ । त्यो मान्छे हेलिकप्टरसम्म आइपुग्न त्यति नै समय लाग्ला । नभन्दै काइँला नजीकै आइपुग्दा हेलिकप्टर शान्त भइसकेको थियो । पाइलट ओल्र्यो । उसले सोध्यो,
काइँला बोल्नै नसक्ने गरी स्याँस्याँ गरिरहेको थियो । कुइरेहरु पनि ओर्ले । बिस्तारै आफ्नो सासलाई नियन्त्रित गरेर काइँलाले पाइलटलाई सबै स्थिति अवगत गरायो । पाइलटले दोभाषेको काम गर्दै कुइरेहरुलाई त्यो कुरा सुनायो । एउटा मानिसको जीवन–मरणको कुरा सुनेर उनीहरु केही बेर कुर्न राजी भए । त्यसको केही बेरमै स्ट्रेचर बोकेर आउनेहरु पनि माथि आइपुगे । अचेत युवकलाई हेलिकप्टरमा हालियो । धौभडेलले पाइलटलाई युवकको अवस्थाको बारे जानकारी गराइदियो । पाइलटले भन्यो,
हेलिकप्टरको रोटर फेरि घुम्न थाल्यो । धूलो उड्न थाल्यो । तर गाउँलेहरु त्यसको परवाह नगरी उभिइरहे । हेलिकप्टरले भुईँ छोड्न थालेपछि उनीहरुले हात हल्लाएर अभिवादन गरे । दुई मिनेट चानचुनमा हेलिकप्टरले भुइँ छोड्यो र अकाशिन थाल्यो । अनि हेर्दाहेर्दै त्यो विशाल चीलगाडी बिस्तारै माथिमाथि चढ्न थाल्यो । पहिले चील, त्यसबाट काग, अनि ढुक्कुर, भँगेरा, फिस्टो जस्तो सानोसानो हुँदै गयो र एउटा डाँडा पछाडि हरायो । केही बेरमा त त्यसको आवाज पनि सुनिन छाड्यो । एकजना गाउँले लामो सास फेरेर आफैसंग बोल्यो,
“भन्न सक्दिनँ काइँला । हामीले गर्न सक्ने यो भन्दा बढी केही थिएन । आशा गरौं, बाँच्ला ।”
बूढा मानिको मुखबाट निस्क्यो,
“इमर्जेन्सी । क्रिटिकल अवस्थामा भएको एउटा बिरामी लिएर ल्याण्ड गर्दैछु । मैले १०२ मा जानकारी गराइसकेको छु । एम्बुलेन्स पठाइदिन्छु भनेका छन् । जस्ट इन केस, तिमीलाई पनि इन्फर्म गरेको ।”
एम्बुलेन्सको पाइलटले खबर पाउनासाथ साइरन र बत्ती अन ग¥यो अनि आफ्नो दक्षताको प्रदर्शन गर्दै फनक्क यूटर्न मा¥यो । उसले आफ्नो पूरै खुट्टाको दबाव एक्सिलरेटरमा दियो । एम्बुलेन्स ताँदोबाट छुटेको तीर जसरी हुत्तिएर एयरपोर्ट तिर हुँइकियो । उता रञ्जीतले पनि डिस्प्याचरसंग सम्पर्क गरिसेकेको थियो । डिस्प्याचरले एम्बुलेन्स बाटोमा भएको र हेलिकप्टर ल्याण्ड हुनु अघि पुग्ने जानकारी दिंदै थियो ।
गल्फ कोर्स सकिने ठाउँनिर उसले बल्लबल्ल त्यो सङगीतप्रेमी चालकलाई उछिन्यो र गति बढायो । गौशाला पुग्ने बेला फेरि त्यत्ति नै लामो जाममा ऊ फस्यो । राष्ट्रपतिको कुनै कार्यक्रमका लागि त्यताबाट ‘सवारी’ चल्न लागेको रहेछ । अर्को साइड पनि पूरै सवारी साधनहरुले भरिएको थियो । मोटरसाइकल र स्कूटरहरु दाहिने, देब्रे, आफ्नो र अरुको साइडमा कुनै पक्षपात नगरी कुना कुनामा कोच्चिन भ्याइसकेको थिए । चलहल गर्न नसक्ने गरी त्यो अव्यस्थित जाममा फसेको एम्बुलेन्स प्रतिवादमा रोएको जसरी प्याँप्याँ गरिरह्यो । मानौं त्यो निर्जीव वाहन भनिरहेछ,
मनिटर र स्टेथेस्कोपले फेला नपारे पनि मानिसको मुटुले पूरै काम गर्न नछोडेको हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा उसको छातिमा दुइटा प्याड गाएर करेण्ट हान्ने उपाय हुन्छ । त्यही उपकरणलाई डिफिब्रिरिलेटर भनिन्छ । मानिस र अवस्था हेरेर कति करेण्ट लगाउने भन्ने कुरा फरक पर्छ । परम्परागत उपकरणमा कति करेण्ट प्रवाह गर्ने भन्ने ठ्याक्कै थाहा नहुने हुनाले चिकित्सकहरुले थोरैबाट बिस्तारै मात्रा बढाउँदै लैजानु पर्ने हुन्थ्यो । तर १०२ को एम्बुलेन्समा अत्याधुनिक र स्वचालित डिफिब्रिरिलेटर जडान भएको थियो । त्यसैले प्याडलाई बिरामीको छातीमा जोड्नासाथ अवस्था अनुसार कति अन्तरालमा कति पटक झट्का दिने भन्ने त्यसले आफै पत्ता लगाउँथ्यो । यसो हुँदा सामान्य जानकारी भएको मानिसले पनि यसको प्रयोग गरेर कसैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो । १०२का प्यारामेडिकहरु त झन आधारभूत तालीम भएकाहरु नै भए । उनीहरुले तेजीका साथ हृदयगति बन्द भएको युवकको छातीमा उपकरण जडान गरे । लामो सास फेरेर पशुपतिनाथलाई सम्झँदै एक जनाले डिफिब्रिरिलेटरको स्वीच अन गरिदियो ।
राजेश र लोनिजा लठारिंदै बाहिर निस्कँदा उसकोे बि एम डब्ल्यू सेभन सिरिजको कार क्लबको भ्यालेले अगाडि ल्याएर तयार राखिसकेको थियो । हुन त हरेक साँझ रात आकर्षक युवतीहरु देख्ने बानी परिसकेको भए पनि भ्यालेले आँखाभरी लोनिजाको सुन्दरता पान ग¥यो । ऊ अरुभन्दा विशेष थिई । राजेशले भ्यालेलाई सय यूरोको एउटा पत्ता टिप दियो । उसले भुईँको इटालियन मार्बल चर्केलाजसरी बूट बजाएर सलाम ग¥यो र तनक्क तन्केर उनीहरु दुबैको लागि पालैपालो ढोका खोलिदियो । लोनिजाका आँखामा टकिलाका गुलाबी धर्साहरु तैरिन थालिसकेका थिए । राजेश पनि होशमा थिएन । उसले क्लबमै शौचालय जाने बहानामा गएर एक्स्ट्यासीको एउटा गतिलो मात्रा सुँघिसकेको थियो ।
सर्वेश्वरले ट्वाँ परेर आफ्नो अगाडि बसेर बुङबुङ चुरोटको धूँवा उडाइरहेको त्यो भीमकाय प्रहरीलाई हे¥यो, जसले भर्खर मात्र उससंग दश लाख यूरोको माग गरेको थियो । हुन त सर्वेश्वरको लागि त्यो सुनेरै आत्तिनुपर्ने रकम त थिएन । तर पनि लातभियाको स्टेट प्रहरीको एउटा जुनियर लेफ्टिनेन्टले उससंग ढुक्कै त्यत्रो रकम माग गर्नु चाहिँ अनौठो कुरा थियो । ऊ आफ्नो छोरा राजेशको ड्रग्ससंगको आवद्धताको कुरा सुनेर नराम्ररी हल्लिएको थियो । तर सर्वेश्वर एउटा चतुर व्यापारी पनि थियो । पश्चिम नेपालको दुर्गम पहाडबाट शून्यबाट जिन्दगी शुरु गरेर भारत र रुस हुँदै लातभिया पुगेर अरबौंपति बन्ने जिन्दगीको क्रममा उसले कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिको सामना गरेको थियो ? त्यसैले भित्रभित्र जति नै हल्लिए पनि त्यसलाई प्रत्यक्षमा प्रकट हुने गरी नदेखाउन उसलाई जिन्दगीले सिकाइसकेको थियो । अहिले पनि ऊ त्यही कलाको दक्षतापूर्वक प्रदर्शन गर्दै थियो । रिंगमा आफू कमजोर भएको भनक मात्र पायो भने पनि प्रतिद्वन्दी दोहोरो आत्मबल र गतिले आक्रमण गर्न थाल्छ भन्ने कुरा उसलाई राम्ररी थाहा थियो । उसले भन्यो,
‘त्यो रकम भनेको सानो होइन अफीसर ।’
योहान्सले ठूटो भइसकेको चुरोटले नयाँ चुरोट सल्कायो । उसले अनुमति नमागी सर्वेश्वरको टेबलमा भएको नोटप्याडबाट एउटा पाना धर्र च्यात्यो । त्यसको सोली जस्तो आकार बनायो र ठूटोलाई त्यो सोलीमा हालेर निभायो । अनि उसले भन्यो,
सर्वेश्वर सोचमग्न भयो । उसलाई थाहा थियो, लातभियाको कानून अनुसार लागू औषध प्रयोगकर्तालाई पनि तीनचार वर्ष कैद हुन सक्छ । हुन त त्यो उससंग कति मात्रामा त्यस्ता पदार्थ बरामद भएको हो भन्नेमा पनि भर पथ्र्यो । राजेश यदि त्यसको कुलतमा फसिसकेकै हो भने पनि अहिलेसम्म ऊ गिरफ्तार त भएको छैन । एउटा सप्लायरको डायरीमा उसको नाम उल्लेख मात्र भएको आधारमा उसलाई कसैले सजायँ दिलाउन सक्दैन भन्ने पनि सर्वेश्वरलाई थाहा थियो । तर उसलाई के पनि थाहा थियो भने, यो कुरा बाहिर निस्क्यो भने त्यससंगै अनावश्यक चर्चा परिचर्चा र समाचारहरु पनि बाहिर आउँछन् । अनि लागू पदार्थको कुलतमा फसिसकेको उसको छोरालाई कसैले चाहेरै पछि लाग्यो भने उम्कन नसक्ने बेलामा समात्न पनि गाह्रो हुँदैन । समस्याको मूल चुरो आफ्नै घरभित्र छ । त्यसैलाई सम्बोधन नगरी अरु कुराहरु सोच्नु भनेको जरामा कीरा लागेको विरुवाको पातमा उपचार गरे सरह हुनेछ । अहिलेलाई यो लालची प्रहरीलाई चुप लगाउनु नै आफ्नो प्राथमिकता हो भनेर सर्वेश्वरले खुट्यायो । उसले भन्यो,
‘म ब्ल्याकमेलर होइन मिष्टर कोइराला । एउटा प्रहरी अफीसर हूँ । त्यसमाथि म चाहेर पनि तपाईंसंग फेरि यस्तो माग लिएर आउन सक्दिनँ । मेरो विश्वास गर्नुस् ।’
योहान्सले एकैछिन ठूटो भएको दोश्रो चुरोटलाई हे¥यो । अर्को सल्काउँ कि नसल्काउँ भनेर एकछिन गम्यो । केही सोचेर उसले त्यसलाई पनि कागजको सोलीमा हालेर निभायो र उठेर सर्वेश्वरतिरै गयो । ऊ पनि बाहिर हेर्दै बोल्यो,
‘ओ के । मिष्टर कोइराला । मेरै मुखबाट सुन्न चाहनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् । तपाईंको यो अफीस कति हाइ–टेक छ भन्ने मैले देखिसकेको छु । रेटिना स्क्यान नभई कोही तपाईंको बरण्डामा छिर्न समेत सक्दैन । तपाईंको र मेरो भेटघाट र वार्तालाप कुनै हाइ डेफिनेसन क्यामराले रेकर्ड गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै ठूलो आइतवार छैन । मेरो उद्देश्य नराम्रो भएको भए यहाँ आएर यसरी स्पष्ट आफ्ना पत्ताहरु तपाईंसामु खोल्ने थिइनँ । मैले आफ्नो घाँटी तपाईंको मुठ्ठीमा राखिदिइसकेको छु । म आफ्नो कुराबाट एक इन्च पनि दायाँबायाँ भएँ भने कुनै पनि बेला निचोरिदिन सक्नुहुन्छ । अब यो प्रमाणित गर्न यो भन्दा बढी म तपाईंलाई के प्रमाण दिऊँ मिष्टर कोइराला ?’
‘दश लाख यूरो, क्यास । त्यो पनि पाँच सयको प्रयोग भइसकेको नोटहरुका रुपमा । बढीमा तीन घण्टाभित्र ।’
आफ्नो बोसको यो अप्रत्याशित माग सुनेर इल्मार्स आश्चर्यचकित भयो । तर उसले त्यो भाव अनुहारमा आउन दिएन । उसले भन्यो,
‘यति कम समयमा सर ? कसरी सम्भव...’
‘कसरी भन्ने तिम्रो टाउको दुखाई हो । तिमीलाई मैले तलब दिने रिजल्टको लागि हो ।’
ऊ सर्वेश्वरको अफीसबाट निस्कने बेला सोच्दै थियो, पक्कै केही गम्भीर समस्या परेको हुनुपर्छ । नत्र ऊ त्यस्तो मानिस होइन । समस्या के भन्ने कुरा आवश्यक परे उसले अवश्य पनि बताउला । नचाहिने प्रश्न सोध्ने इल्मार्सको काम थिएन । उसको काम आदेश मान्ने हो र मागिएको बेला सल्लाह दिने हो । ऊ आफ्नो काममा जुट्यो । भनिएको रकम भनिएकै रुपमा उसले डेढ घण्टामै जोहो गरेर सर्वेश्वरलाई खबर ग¥यो । अब सर्वेश्वरको सामु योहान्सको फोन कुर्ने बाहेक अरु केही काम थिएन । ऊ राजेशको बारेमा सोच्न थाल्यो । आफ्नो एक्लो छोरा कहिले र कसरी यस्तो खराब संगतमा लागेछ भन्ने थाहा नभएकोमा उसले त्यसदिन आफूलाई पटकपटक धिक्का¥यो । ठ्याक्कै चार घण्टामा योहान्सले छोडेर गएको फोन थर्थर गरेर काम्न थाल्यो । उसले देख्यो,
‘रकम लिएर तपाईं सेन्ट पिटर्स चर्चमा आउनुस् मिस्टर कोइराला । त्यहाँ अगाडि फूलबारी नजीक तपाईंले एउटा सानो स्टलमा क्याण्डीहरु बेच्न बसेकी कपाल सेताम्य फुलेकी एक बृद्धा देख्नुहुनेछ । उसले नीलोमा सेता फूलहरुको बुट्टा भएको कमिज लगाएकी हुनेछ । तपाईं ठीक छ बजे त्यहाँ पुगेर उससंग समय सोध्नुहुनेछ । उसले तपाईंलाई नौ बजेर सत्ताइस मिनेट गयो भनेर गलत समय बताउँछे । त्यति भएपछि तपाईं रकम उसलाई सुम्पेर फर्किनुहुनेछ । तपाईं घर पुग्दा त्यो डायरी तपाईंलाई कुरिरहेको हुनेछ । तपाईंको समस्या खत्तम ।’ योहान्स बोल्न थाल्यो भनेर यी बाँकी कुरालाई डिटेलमा लेख्नु पर्ला ।
आफ्नो छोराप्रति सर्वेश्वरको मोह कतिसम्म छ भन्ने कुरा इल्मार्सलाई थाहा थियो । उसले आफ्नो दक्षताको प्रदर्शन गर्दै गाडीको गति हुनसक्ने जति बढायो । इमर्जेन्सीको संकेत दिन चारैवटा साइडलाइट पिलपिल बाल्दै उसले अघिल्लो मोडबाट गाडीलाई एकोहोरो सवारी चल्ने लेनमा हालिदियो । त्यसो हुँदा अस्पतालसम्मको बाटो आधाभन्दा कम छोटो हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो । उताबाट आइरहेका गाडीहरु अप्रत्याशित रुपमा छिरेको त्यो डरलाग्दो गाडीको झनै डरलाग्दो चालसंग प्रतिवाद गरे जसरी चर्को हर्न बजाउन थाले । तर त्यसलाई साइड नदिने ह्याउ कसैको थिएन । इल्मार्स त्यसको पटक्कै वास्ता नगरी दायाँबायाँ गर्दै अघि बढिरह्यो । अस्पतालको पोर्चमा पुग्दा पनि उसको गति निकै तीब्र थियो । टायरहरु चर्र कराउने गरी ब्रेक हानेर गाडी पूर्णरुपले नरोकिंदै उसले ड्राइभिंग सिटबाट ओर्लेर पछाडिको ढोका खोल्न भ्याइसकेको थियो ।
“शिट्..।” सर्वेश्वरको मुखबाट निस्क्यो । उसले जिन्दगीमा यसरी एकपछि अर्को ‘सकर पन्च’हरु नखाएको धेरै भइसकेको थियो । उसले आफूलाई निकै कठिनतापूर्वक नियन्त्रण ग¥यो । इल्मार्स अझै पनि निर्विकार भावले उभिइरहेको थियो । सर्वेश्वरले योहान्सबाट आफ्नो आँखा इल्मार्सतिर उठायो र उसलाई भन्यो,
“त्यो केटीको बाबुआमासंग डिल गर इल्मार्स । रकमको कुनै सुर्ता नगरे हुन्छ । ह्वाटएभर दे वान्ट ।”
“यहाँ तपाईंको वैभवले काम गर्दैन मिष्टर कोइराला । किनभने तपाईंलाई थाहा छैन, दुर्घटनामा मरेकी लोनिजा कसकी छोरी थिई ।”
सर्वेश्वर अझै अलमल्ल प¥यो । छेउमा भएको मानिस, जसलाई उसले डा. लूकाको सहयोगी ठानिरहेको थियो, वास्तवमा डा. लूका हो भने डा. लूकाको कुर्सीमा बसेको यो मानिस को हो ? यसको अनुहारमा आएको प्रश्न शायद त्यो मानिसले पनि पढ्यो ।
“मलाई.....दिमित्रिस भन्छन् ।”
सर्वेश्वर केही बोल्न सकिरहेको थिएन । एउटा बाबुका लागि त्यो भन्दा दुखद र पीडादायी कुरा अरु के हुनसक्छ जब उसले आफ्नो एक्लो छोरा बरु अस्पतालको बेडमै मरोस् भन्ने कामना गर्न परोस् । निकै बेर सोचेर उसले डाक्टरलाई भन्यो,
भ्रमर ‘भावुक’ ।
आख्यानको तुलनामा कविताहरु किन बिक्दैनन् भन्ने विषयमा नेपालगञ्ज वरपरका दुई प्रख्यात कविहरुका साथमा काठमाण्डौबाट आएका पाहुना भ्रमर भावुकले निकै गहन विश्लेषण पस्किएका थियो । भ्रमर ‘भावुक’ले कविता लेख्नु आफ्नो पागलपन भएको बताएको थियो । साधारण पहिरनमा आयोजकहरुले चिनोको रुपमा प्रदान गरेको गम्छा भिरेको भ्रमर ‘भावुक’लाई मन्त्रमुग्ध भएर हेरिरहेकी, उसका एक–एक शव्दलाई स्वाद लिएर निलिरहेकी थिई एउटी सुन्दर र आकर्षक युवती ।
छायाँका लागि त्यो दिन कुनै पर्वभन्दा कम थिएन । किनभने बहसपछि भ्रमर ‘भावुक’ले आफ्ना केही कविताहरु वाचन गर्ने कुरा संचालकले शुरुमै बताएका थिए । उसलाई व्यग्रताका साथ त्यस क्षणको प्रतीक्षा थियो । आफ्नो प्रिय कविलाई ऊ पहिलोपटक प्रत्यक्ष देखिरहेकी थिई । भ्रमर ‘भावुक’का कविताहरु प्रकाशित हुँदा उसको फोटो कहीं पनि हुँदैन थियो । छायाँलाई अचम्म लाग्थ्यो । किन होला ? उसले त्यसका बारे निकै सोचेकी थिई । कहिले उसलाई लाग्थ्यो भ्रमर ‘भावुक’को बाहिरी रुप असाध्यै नराम्रो थियो होला । त्यसैले ऊ आफ्नो फोटो दिंदैनथ्यो । त्यस्तो बेला उसलाई लाग्थ्यो, बाहिरी रुप त आडम्बर मात्रै हो । त्यो क्षणिक कुरा हो । त्यति सुन्दर कविताहरु लेख्ने मानिसको मन पनि सुन्दर हुनुपर्छ । त्यही नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । कहिलेकहीं उसलाई लाग्थ्यो भ्रमर ‘भावुक’को रुप पनि उसका कविताहरुजस्तै सुन्दर हुनुपर्छ । अझ त्यसभन्दा बढी । शायद कसैको आँखा नलागोस् भनेर उसले आफूलाई संसारको आँखाबाट लुकाउने गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो बेलामा ऊ भ्रमर ‘भावुक’को एउटा काल्पनिक छायाँचित्र आफ्नो मनको क्यानभासमा कोर्न थाल्थी । बिभिन्न कल्पनाहरु थरिथरिका ब्रशहरु बनेर त्यहाँ बराल्लिन थाल्थे । ‘भ्रमर भावुक’का उसले पढेका कविताहरु रंग बनेर पोतिन थाल्थे । अनि जुनसुकै चित्र बनेपनि, त्यो उसलाई सुन्दर लाग्थ्यो ।
कहिलेकहीं ऊ सोच्थी, कस्तो हुन्छ होला भ्रमर ‘भावुक’कै मुखबाट उसका कविताहरु सुन्दै उसको काखमा टाउको अडाउनु ? एक हातले आफ्ना कविताको डायरी समाएर, अर्को हातका औंलाहरुले बिस्तारै उसको कपाल चलाउँदै गर्दा उसले पढिरहेका कविताहरु सुन्दै निदाउनु कस्तो अनुभव हुन्छ होला ? यस्तो विचार आएको बेला छायाँ नेपाली आफैसंग लजाउँथी । उसको गोरो अनुहारमा लाजका लालीहरु पोतिन्थे । यस्तै कल्पनाहरु गर्दै कति रात निदाएकी थिई ऊ । अनि कति रात अनिंदो पनि काटेकी थिई । भ्रमर ‘भावुक’का प्रकाशित कविताहरु भेटेसम्म काटेर एउटा डायरीमा टाँसेर पनि राखेकी थिई ।
त्यही भ्रमर ‘भावुक’लाई आज ऊ बीसपच्चीस फीटको दूरीमा देखिरहेकी थिई । उसको स्वर सुनिरहेकी थिई । उसले कल्पना गरेको दुई विपरित रुपको बीचमा थियो भ्रमर ‘भावुक’ । न ऊ हेर्नै नहुने नराम्रो थियो, न त असाध्यै राम्रो । उसका आँखा गहिरा थिए । अलिअलि झुसझुस दाह्री चाहिँ काटेकै भए अझ सुहाउँथ्यो होला उसलाई । भ्रमर ‘भावुक’को स्वर ओजपूर्ण थियो । उसको काखमा आफ्नो टाउको भलै नहोला, उसका औंलाहरु मायालु पाराले आफ्ना कपालमा भलै नचल्लान्, तर भ्रमर ‘भावुक’को स्वरमा नै उसको कविता सुन्न त पाउने थिई छायाँले । बोल्दाबोल्दै एकपटक दर्शक श्रोताहरुमा आँखा डुलाउने क्रममा एकपटक भ्रमर ‘भावुक’का गहिरा आँखा उसका आँखाहरुसंग ठोक्किन पुगेका थिए । एकै क्षण ती त्यहाँ अडेका थिए । उसलाई भ्रमर ‘भावुक’को ओठमा मधुरो मुस्कान प्रकट भएकोजस्तो लागेको थियो । कि ती दुबै कुरा उसका भ्रम थिए ? त्यसपछि पनि ऊ एकटक भ्रमर ‘भावुक’को अनुहारमै आँखा गाडेर सुनिरहेकी थिई । तर भ्रमर ‘भावुक’का आँखाहरु फेरि भौंतारिएर उसमा परेका थिएनन् । तै पनि, उसका लागि अरु कोही पनि त्यहाँ थिएनन् । मात्र ऊ थिई, अनि भ्रमर ‘भावुक’ । त्यही बेला सबैले करतलध्वनिमा थपडी बजाएर उसलाई आफूहरु पनि त्यहाँ भएको कुरा सम्झाए । बहस सकिएको थियो । संचालकले सबैलाई धन्यवाद प्रकट गरेर भन्यो,
“अब म कवि भ्रमर ‘भावुक’लाई आफ्ना केही कविता सुनाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।”
भ्रमरले खल्तीबाट केही पानाहरु निकाल्यो । छायाँको मुटु बेतोड उफ्रिन थाल्यो । भ्रमरले चार–पाँचवटा लामा–छोटा नयाँ र पुराना कविताहरु सुनायो । छायाँ सम्मोहनमा परेको मानिस सरह मन्त्रमुग्ध भएकी थिई । अर्को कार्यक्रम शुरु हुनेबेला भएपछि भ्रमर ‘भावुक’ दर्शकहरुसंग बिदा मागेर मञ्चबाट ओर्लियो र बाहिरतिर लाग्यो । छायाँ पनि हतारहतार निस्की । उससंग बोल्ने अर्को मौका फेरि पाइएला नपाइएला के थाहा । बाहिर चौरमा उसले भ्रमर ‘भावुक’लाई भेट्टाई । उसलाई बोल्न पनि लाज लागिरहेको थियो तर उसले नमस्ते गरी र आफू उसका कविताहरुको प्रशंसक भएको बताई । भ्रमरले ‘भावुक’ले उसलाई औपचारिक धन्यवाद दियो । छायाँले केही सम्झेझैं आफ्नो डायरी उसतिर तेस्र्याई र भनी,
भ्रमर ‘भावुक’ले उसलाई पुलुक्क हे¥यो, मुसुक्क मुस्कायो र छायाँको डायरीमा कलात्मक अक्षरमा लेख्यो,
‘ए, उसको खास नाम त यस्तो पो रहेछ ।’ छायाँले मनमनै सोची । उसलाई पनि आफ्नो खास नाम पटक्कै मन पर्दैन थियो । कस्तो नकारात्मक लाग्थ्यो उसलाई आफ्नो त्यो नाम । उसले भ्रमरलाई सोधी, “आफ्नो नाम किन परिवर्तन गर्नुभएको ?”
भ्रमर खिस्स हाँस्यो । उफ्...हाँस्दा कति हिसी परेको देखिन्थ्यो ऊ । छायाँलाई आफ्नो मुटु नै उफ्रेर घाँटीमा आइपुगेको जस्तो लाग्यो । भ्रमरले भन्यो, “कलेज पढ्ने बेलातिर लेख्न थालियो । मलाई आम मानिसका पीडाहरु लेख्न मन लाग्थ्यो, अनि प्रेमका कविताहरु । साथीहरुले भने, जनकध्वज विष्ट भन्ने नामै सामन्ती जस्तो छ । न यो सामाजिक न्यायका लागि लेख्ने जस्तो छ, न रुमानी । मलाई पनि हो जस्तै लाग्यो । त्यसैले भ्रमर ‘भावुक’ भनेर लेख्न थालें ।”
छायाँले भनी, “भ्रमर..अर्थात् भमरो । एउटा फूलको रस चुसेर अर्को फूलमा भौंतारिरहने भमरो त झनै ठूलो शोषक हो नि । अनि त्यो कहाँ भावुक हुन सक्छ र ?”
भ्रमर भावुकले उसलाई क्वारक्वार्ती हेरिरह्यो । छायाँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो । यसरी प्वाक्क किन बोल्नु परेको होला ? उसलाई पछुतो भयो । उसले कुरा सपार्न खोज्दै भनी, “माफ गर्नुहोला । मैले भन्न खोजेको कुरा...”
उसको कुरा काट्दै भ्रमरले भन्यो, “हैन हैन । तपाईँले भन्नुभएको एकदमै ठीक हो । मैले यस हिसाबबाट त आजसम्म सोचेको थिइनँ । तर विश्वास गर्नुस्, तपाईंले भनेको जस्तो भमरो चाहिँ म हैन । म भावुक पनि छु ।”
यसो भन्दाभन्दै मनमनै भ्रमर सोच्दै थियो, ‘म किन उसलाई स्पष्टीकरण दिइरहेको छु । म के हूँ, कस्तो हूँ भन्ने कुरासंग उसलाई के मतलब र ? ऊ त मेरा कविताहरुको पाठक मात्र न हो ।’
दुबै एक छिन केही बोलेनन् । छायाँले विषय परिवर्तन गरी, “कहिलेसम्म नेपालगञ्जमा ?”
“पर्सी फर्किने हो । हुन त मेरो सेसन आज सकियो । तर पहिलोपटक नेपालगञ्ज आएको हुनाले राम्ररी सहर नै देखेको छैन । त्यसैले भोलि यताउति घुमघाम गर्न अड्किएको हूँ । तपाईं भन्नुस् न बरु, तपाईं त यतैको मान्छे । हेर्ने घुम्ने ठाउँहरु कुनकुन होलान् ?”
फेरि एकपटक नचाहँदा नचाहँदै छायाँको मुखबाट मनका कुराहरु शव्द बनेर हाम्फालिहाले, “भन्ने मात्र किन ? चाहनुहुन्छ भने म तपाईंलाई घुमाइदिन पनि सक्छु हाम्रो सहर ।”
बोलेको कुरा त ऊ कसैगरीपनि फिर्ता लिन सक्दिनथिई । हत्तेरी, के भन्ठान्यो होला भ्रमरले ? उसले आँखा झुकाई । भ्रमर मुस्कायो र भन्यो, “यो त मेरो सौभाग्य हुनेछ ।”
छायाँले निश्चिन्तताको लामो सास फेरी । उसले सोधी, “तपाईं कहाँ बस्नुभएको छ ?”
“आयोजकहरुले सिद्धार्थ होटलमा राखेका छन् ।”
छायाँले भनी, “म बिहान आठ बजे तपाईंलाई लिन आउँछु ।
भ्रमरले भन्यो, “म बिहान आठ बजे तयार भएर तल ओर्लेर बसिरहन्छु ।”
“उठ्न त सक्नुहुन्छ नि त्यति बेलै ?”
“त्यसको पीरै नगर्नुस् । म जति बजे सुते पनि पाँच बजे व्यूँझने मानिस हूँ ।”
छायाँ उसलाई नमस्ते गरेर गई ।
त्यस रात छायाँलाई निन्द्रा नै लागेन । जीवनमा कल्पनामात्र गरेका तर पूरा हुने सम्भावनासम्म पनि नदेखेका कुराहरु पनि अनायास, अप्रत्याशित रुपमा वास्तविक भइदिंदा रहेछन् । भ्रमर भावुकका हरेक कविता पढ्दा छायाँले कुनै दिन उससंग भेट होला भन्ने आशा गरेकी थिई । त्यो भेट कस्तो हुन्छ, के कुरा हुन्छ भन्ने बारेमा उसले दुई तीन सय फरक फरक कल्पनाहरु गरेकी थिई । तर वास्तविक भेट ती सबैभन्दा नितान्त पृथक भइदियो । छायाँ भ्रमर भावुकले आफ्नो डायरीमा लेखिदिएका कलात्मक अक्षरहरुलाई एक टक नियालेरै अघाइन । त्यस रात उसले भ्रमरका आफूसंग भएका सबै किताबहरु ओल्टाइ पल्टाई गरिरही । उसले भ्रमर भावुकका हरेक कविताहरु फेरि एकपटक पढी । लौ त भन्ने हो भने अधिकांश त उसलाई मुखाग्रै पनि थिए । उसले कतै सुनेकी वा पढेकी थिई, एकजना केदार शर्मा भन्ने कविलाई माधवप्रसाद घिमिरेका सबैजसो कविताहरु कण्ठै हुन्छन् रे । यस अर्थमा भन्दा छायाँ भ्रमर भावुकको केदार शर्मा थिई । छटपटीमै रात बिताउँदा छायाँ सोचीरही, के भ्रमर भावुकलाई पनि त्यस्तै भएको होला ?
उता भ्रमर भावुकलाई पनि छायाँको सम्झना आइ नै रहेको थियो । हुन त भ्रमरले आफ्ना अरु थुप्रै प्रशंसकहरु नभेटेको त होइन । तर छायाँ अरुभन्दा भिन्न थिई । सुन्दर थिई, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर त्यो भन्दा पनि बढी उसको बोलीवचन, व्यक्तित्व र विशेष गरेर उसका आँखाहरुले उसलाई अरु भन्दा भिन्न बनाउँथे । गहिरा थिए ती आँखाहरु, उदास पनि थिए । कुनै सपनाका प्रतिविम्व तैरिरहेका आँखाहरु थिए छायाँ नेपालीका । भ्रमरलाई यस्तो लाग्यो, अनन्त गहिराइमा कतै लुकेर बसेका थिए ती सपनाहरु । छायाँसंग भेट भएको साँझ त्रिभुवन चोकको कुनै एउटा प्रख्यात सेकुवा खाने ठाउँमा आयोजकहरुले अतिथिहरुलाई लगेका थिए । साहित्यकारहरुको जमघट भएपछि त्यहाँ सुरापान हुने नै भयो । सुरापान भएपछि रुमानी वातावरण नहुने पनि कुरा भएन । रुमानी वातावरणमा भ्रमर भावुकका कविताहरुको माग त अपरिहार्य नै भयो । भ्रमरले केही नयाँ कविताहरु सुनायो । ती कविताहरु उसले छायाँलाई सम्झिएर त्यहीं रचेको थियो । रातको पौने एघार बजे मातेका दुई साहित्यकारहरुको वाकयुद्ध मल्लयुद्धमा परिणत भएपछि मात्र जमघटको औपचारिक समापन भयो । साढे एघार बजे होटलको कोठामा गएर नरम बिच्छ्यौनामा डङ्ग्रङ्ग पछारिंदा पनि भ्रमर भावुकको मनमथिंगलमा छायाँका आँखाहरु नाचिरहेका थिए । ऊ तिनै आँखाहरुमा डुबुल्की मार्दै निदायो, कुनै गोताखोरले मोतीका दानाहरु खोजेजसरी उसका सपनाहरु खोज्दै ।
आठ बज्नुभन्दा तीन मिनेट अघि नै भ्रमर भावुक होटलको लबीमा आएर बसिसकेको थियो । त्यसको पाँच मिनेटपछि छायाँ बिष्ट आइपुगी । उसले आकाशे नीलो रंगको कुर्ती र सेतो जिन्स लगाएकी थिई । मेकअप त ऊ गर्दैनथिई । ऊ बिहानी झैं उज्याली देखिएकी थिई । भ्रमर भावुक उसको स्वागतमा अघि बढ्यो । पहिले मुस्कान अनि नमस्तेको आदानप्रदान भयो । दुबै जना बाहिर मूल सडकमा निस्के र बाटो काटे । अर्कोपट्टि उताबाट आइरहेको एउटा इ रिक्सालाई छायाँले हात दिई । दुबै त्यसको पछिल्लो सिटमा बसे । सिट धेरै चौडा नभएको हुनाले उनीहरुको कुम र खुट्टा एकआकार्कसंग लपक्कै टाँसियो । भ्रमर भावुकलाई त्यो न्यानोले रमरम भयो । रिक्साले गति लियो । उताबाट आएको हावाले छायाँको कपाललाई उडाउन थाल्यो । ऊ बेलाबेला आफ्ना लामा र सुलुत्त परेका औंलाहरुले त्यसलाई पन्छाउँथी । लोभी हावा फेरि उसको कपाल चुमेर उडाउन थाल्थ्यो । भ्रमर हावाको डाहाडो गर्दै त्यो मोहक खेल हेरेर रमाइरह्यो । छायाँले कानमा साधारण डिजाइनको चाँदीको टप लगाएकी थिई । ताराको आकारको त्यो टप उसको कानमा निकै सुहाएको थियो । भ्रमरले आफूलाई हेरिरहेको थाहा पाएर उसले पुलुक्क हेरी । भ्रमर चोरी पक्डिएको जस्तो अगाडि हेर्न थाल्यो । छायाँ मुसुक्क मुस्काई । परिस्थितिलाई अलि सहज बनाउने ध्येयले भ्रमरले सोध्यो, “हामी कहाँ जाँदैछौं ?”
छायाँले भनी, “नेपालगञ्ज खानापीनाको लागि पनि प्रख्यात सहर हो । यहाँ बिहान, दिउँसो र साँझका विशेष खानाहरु छन् । पुराना ठाउँहरु ।”
दंग पर्दै भ्रमरले भन्यो, “यो त झनै गज्जब भैहाल्यो नि । म त साह्रै ठूलो खन्चुवा पो हूँ त ।”
दुबै जना धक फुकाएर हाँसे ।
“तर पहिले वागेश्वरी माताको दर्शन । खाने कुरा पछि ।”
छायाँले तेश्रो चोकमा रिक्सा रोक्न लगाई । भ्रमर ओर्लनेबेलासम्म उसले भाडा तिरिसकेकी थिई । उसले हाँस्दै भनी, “यहाँ भाडामा किचलो हुँदैन । एउटा चोकको दश रुपैंया रेट । चोक गन्ने–पैसा तिर्ने ।”
उनीहरुले वागेश्वरी मन्दिर र जुँगा भएको महादेवको दर्शन गरे । छायाँ नेपालगञ्जका बारेमा बोलीरही । भ्रमर चुपचाप माउको पछि लागेको पाठो जसरी हिंडिरह्यो । मूलसडकमा आएर उनीहरु फेरि रिक्सा चढे । क्याम्पस चोक निर रिक्साबाट ओर्लंदै उसले भनी,“नेपालगञ्ज आएर बिहान चौलिक्काको हलुवा र पराठा खानुभएन भने तपाईंको आधा जिन्दगी खेर गयो ।”
यसपटक भ्रमरले उसलाई उछिनेर भाडा चुकायो । ऊ चोक गन्दै आएको थियो । साधारण टिनको छानो भएको सानो पसलमा एकजना मोटो मानिस गञ्जी र लुंगी लगाएर आगोमाथि विशाल तावामा हलुवा र पराठा बनाइरहेका थिए । भ्रमरले त्यति सफा, सेतो र आँखै तिर्मिराउने गञ्जी कहिले पनि देखेको थिएन । त्यहाँ मानिसहरुको भीड थियो । ठूलो तावाभरिको एउटै पराठालाई मागेको ग्राम अनुसार चुँडाली–चुँडाली बेच्ने चलन रहेछ । भ्रमरलाई छायाँले मागेको ५०० ग्राम कसरी खानु जस्तो लागेको थियो । तर चौलिक्काको हलुवा र पराठा यति स्वादिलो थियो, उनीहरुले अर्को २५० ग्राम थपेर बुत्याए । भ्रमरले भन्यो, “अब भरेसम्म केही खानै सकिन्न होला ।” छायाँ मिलेका दाँतहरु देखाएर हाँसी र भनी, “यहाँको विशेषता के भने, जति खाए पनि पच्छ । अहिले त्यसो नभन्नुस् । पहिले विदेश भ्रमण त सकेर आऔं ।”
उनीहरु एक्कामा चढेर रुपेहडिया तिर लागे । त्यहाँ फोहोर बजारको रमझम हेर्ने बाहेक अरु केही भएन । छायाँले भनी, “यहाँ कुर्ता सुरुवाल र साडीहरु सस्तो राम्रो पाइन्छ ।”
भ्रमर पसलहरु हेरिरह्यो । छायाँले पुलुक्क उसलाई हेर्दै भनी, “तपाईंको कसैलाई लगिदिनु छ कि ?”
भ्रमरले उसको आँखामा हेरेर भन्यो, “कुर्ता वा साडी लगिदिने मेरो अहिलेसम्म कोही छैन ।”
के छायाँको अनुहारमा एक किसिमको प्रसन्नता आएको हो ? या त्यो आफ्नो मनको चोर थियो भन्ने कुरा भ्रमरले खुट्याउन सकेन । उसले अप्ठ्यारो मान्दै भन्यो, “आफ्नो सिङ्गै दिन मेरा लागि खर्च गर्नुभएको छ । अन्यथा लिनुहुन्न भने, के बरु म तपाईंका लागि केही सानो उपहार किनिदिन सक्छु ?”
छायाँले भनी, “मलाई लुगाफाटा, गहना र श्रृंगारजस्ता कुराहरुमा रुचि छैन ।”
भ्रमरले निकै कर गर्दा पनि छायाँले पटक्कै मानिन । रुपेहडियाबाट फर्केर त्रिभुवन चोकको चाट, ओमशान्ति रोडमा मुबारकको विरयानी र कबाब, अनि बेलुका रावडी र मलाइवाला दूध खाएपछि छायाँले भनी, “यति भएपछि नेपालगञ्जको धेरैेजसो अनुभव भयो तपाईंलाई ।”
धम्बोजी चोकबाट छुट्टिनुअघि उनीहरुले फोन नम्बर साटासाट गरे । भ्रमरलाई भोलिपल्ट बिहानै काठमाण्डौ फर्किनु थियो । त्यो सम्झेरै उसलाई वैराग लाग्यो । आफ्नो गुँडतिर फर्किरहेकी छायाँलाई पनि नियाश्रो लागिरहेको थियो । छेउको पसलको रेडियोमा बच्चुकैलाशको गीत बजिरहेको थियो,
“बहकिँदो मन...तँ बहकी नजा,
आश नदेखा ए चञ्चल हावा...”
ऊ सोच्न थाली, कति वर्ष अघि कसैले लेखेको र रेकर्ड भएको यो गीत आज उसका लागि कसरी ठ्याक्कै मिल्ने भएको होला ? भ्रमर भावुकलाई भेटेपछि साँच्चै उसको मन बहकिएको थियो । उसलाई थाहा थियो, यसको परिणाम केही हुने छैन । भ्रमर भावुक काठमाण्डौ पुग्छ र आफ्नो संसारमा हराउँछ होला । केही दिनमा त उसले छायाँ विष्ट भन्ने कोही मानिसलाई भेटेको थिएँ भन्ने पनि बिर्सन्छ होला । त्यसैले ऊ पनि गीतले झैं मनमनै भनिरहेकी थिई, आश नदेखा ए चंचल हावा । तर उसको मन कहाँ मान्थ्यो र ? आफ्नो कोठामा पुगेर उसले मन भुलाउने निकै यत्नहरु गरी । किताब पढ्न खोजी, टेलिभिजन हेर्न खोजी, गीत सुन खोजी । तर जे गरे पनि त्यो सबैले कतै न कतैबाट उसलाई भ्रमर भावुक सम्झाइरहे । हार मानेर उसले त्यो निरर्थक प्रयत्न गर्नै छाडिदिई । दिउँसो भएका कुराकानी, भ्रमरले उसलाई हेरेको आँखाको भाका इत्यादिलाई केलाएर हेर्दा उसलाई लाग्यो, शायद भ्रमर पनि उसप्रति आकर्षित भएको हुनुपर्छ । आखिर उसमा के नै कमी थियो र ? ऊ राम्री थिई, पढेलेखेकी थिई, साहित्यिक चेत राम्रो थियो अनि मुख्य कुरा भ्रमर भावुकको पहिलेदेखिकै प्रशंसक थिई । एउटा मान्छेलाई यतिभन्दा बढी अरु के चाहिन्छ कुनै युवतीप्रति आकर्षित हुनका लागि ? अचानक उसको फोन बज्यो । ऊ तन्द्राबाट झस्केर मुक्त भई । उसले फोन हेरी । उसको मुटुले मानौं ढुकढुक गर्नै बिस्र्याे । उसका सासहरु टक्कै रोकिए । फोनको डिस्प्लेमा आइरहेको थियो,
“प्रिय कवि कलिंग ।”
भ्रमर भावुकको नम्बर उसले प्रिय कवि भन्ने नाममा केही घण्टा अघिमात्र उसले सेभ गरेकी थिई । के गरौं के गरौं भन्दाभन्दै चार पाँचपटक उसलाई बोलाएर फोन शान्त भयो । उसले हतारहतार त्यही नम्बरमा कल गरी । एकै घण्टीमा उताबाट भ्रमर भावुक बोल्यो,
उसले भनी, “कति छिटो काटिदिनुभएको ?”
“यस्सो घडी हेरें, अबेर भइसकेको जस्तो लाग्यो । डिस्टर्ब गरें कि भनेर डर लाग्यो । त्यसैले...”
“म एघार बाह्र नबजी सुत्दिनँ ।”
“उसो भए डिस्टर्व भएको छैन ?”
“नाइँ, छैन ।”
“के गर्नुुहुन्छ त्यति अबेरसम्म? टिभी ?”
“नाईँ । टिभी हेर्ने त्यति धेरै ‘शौक’ छैन । किताबहरु पढ्छु ।”
“कस्ता किताबहरु पढ्न रुचाउनुहुन्छ ?”
“जस्तो पनि । यो ऊ भन्ने छैन । शुरुका दश पेजले तानेन भने चाहिँ छोडिदिन्छु ।”
केही बेर मौनता छायो । भ्रमरले सोध्यो,
“त्यसरी छोडेकामा मेरा कुनै संग्रह पनि छ ?”
बेडमा पुल्टुङ्ग पल्टेर छायाँले भनी,
“तपाईंका प्रकाशित सातवटै कविता संग्रह मैले शायद सय्यौं पटक दोहो¥याएकी छु । कुन संग्रहमा कतिवटा कविता छन्, तिनका शीर्षकहरु के के हुन् र कुन पृष्ठमा कुन हरफहरु छन् भन्ने पनि मलाई कण्ठै छ ।”
“म झूट बोल्छुजस्तो लाग्यो ?”
“मैले त्यसो भनें र ?”
“नपत्याए परिक्षा लिन सक्नुहुन्छ ।”
“हो त ?”
एकछिन केही सोचेजसरी मौन भयो भ्रमर भावुक । अनि उसले घाँटी सफा गर्दै भन्यो, “ल त्यसो हो भने भन्नुस्, मेरो चौथो कविता संग्रहको नाम के हो ?”
हाँस्दै छायाँले चुनौती दिई, “प्रश्न स्पष्ट पार्नुहोस् कवि महोदय । चौथो प्रकाशित संग्रह कि, लेखेको चाहिँ चौथो ? किनभने मैले कतै कुनै अन्तर्वातामा पढेकी थिएँ, तपाईंको लेखिएको चौथो संग्रह तीन वर्षसम्म त्यसै रह्यो । पाँचौं चाहिँ पहिले प्रकाशित भयो, चार नम्बरमा ।”
भ्रमर भावुक चमत्कृत भएको थियो । ऊ बोल्न सकेको थिएन । छायाँले नै भनी, “लेखिएर बसेको संग्रहको नाम चाहिँ ‘बरफको तातो’ हो । त्यसमा सत्ताइसवटा कविताहरु छन् । छापिएको चौथो, जुन लेखनको हिसाबले पाँचौं हो, त्यसको नाम ‘आकाश अँगाल्ने रहरहरु’ हो । त्यसमा बत्तीस कविताहरु छन् । मैले ठीक भनें ?”
भ्रमर भावुक साँच्चै नै भावुक भयो । कसैले आफ्ना कृतिहरुसंग यतिविधि प्रेम गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसका लागि सुखद हुने नै भयो । छायाँले फेरी भनी,
“सबै कविताका शीर्षकहरु पजि भन्न सक्छु । पालैपालो सबै सुनाउन पनि सक्छु ।”
“भयो भयो । मलाई विश्वास भयो । तर मलाई लागिरहेछ म कुनै सपना देखिरहेको छु ।”
“मलाई पनि तपाईंसंग साँच्चै भेटेकी हूँ, पूरै दिन तपाईंसंग बिताएकी हूँ भन्ने कुरा सपनाजस्तो नै लागिरहेको छ ।”
“यी दुबै कुराहरु के साँच्चै सपना त हैनन् ?”
“तपाईंलाई के लाग्छ ?“ छायाँले प्रतिप्रश्न तेस्र्याई ।
“मलाई थाहा छैन । म भन्नै सक्दिनँ ।”
“त्यसो भए, कसरी निक्र्यौल गर्ने त ?” उसले फेरि अर्को प्रश्न गरी ।
केही बेर सोचेर भ्रमरले भन्यो, “एउटै तरिका छ ।”
“के तरिका ?”
“एक पटक फेरि भेट्ने । अनि ध्यान दिएर एकआर्कालाई हेर्ने । सुन्ने.......एकपटक छोएर हेर्ने ।”
छायाँलाई उसको अन्तिम दुई शव्दले रोमाञ्च भयो । उसको शरीरभरि काँडा उम्रेजस्तो भयो । छोएर हेर्ने ? कस्तो हुन्छ होला त्यो स्पर्श ? के भन्न खोजेका होला भ्रमरले । ऊ केही बोल्न सकिन । भ्रमरले भन्यो, “माफ गर्नुहोला छायाँ । मैले केही गलत आशयले कुनै कुरा भन्न खोजेका होइन । तपाईलाई शायद नराम्रो लाग्यो क्यारे ।”
हतारिंदै छायाँले भनी,
“होइन होइन । त्यस्तो नसोच्नुस् ।”
“मेरो फ्लाइट भोलि बिहान एघार बजेको हो । दश बने एयरपोर्ट पुग्ने समय । तपाईं चाहनुहुन्छ भने म नौ बजे नै पुग्न सक्छु ।”
केही सोच्दै नसोची छायाँले प्वाक्क भनी,
“तपाईं त पाँचै बजे उठ्ने मान्छे, के गर्नुहुन्छ नौ बजेसम्म ? आठै बजे किन पुग्न सक्नुहुन्न ?”
भ्रमर भावुक निकै बेर केही बोलेन । छायाँलाई लाग्यो, कतै लाइन नै काटिएको त हैन ? त्यही बेला भ्रमरले गम्भीर स्वरमा भन्यो,
“ठीक भन्नुभो । के गर्नू त्यत्रो बेर ? म साढे सातै बजे पुग्छु ।”
छायाँले मुसुक्क हाँस्दै भनी,
“गूड नाइट ।”
अनि उसले लाइन काटिदिई । के गरौं के गरौं झैं एकछिन सोची, खाटमा उत्तानो परेर सिलिंगतिर हेरिरही । तकियालाई अँगालो मारेर एक्लै हाँसी । आफैसंग लजाई र बत्ती निभाइदिई । उसलाई थाहा थियो, आजको रात पनि निन्द्रा आउनेछैन । कुनबेला भाले बास्ला भनेर कोल्टे फेर्दाफेर्दै बित्नेछ यो लामो, निकै लामो रात ।
नेपालगञ्जमा कसरी उनीहरुको पहिलो भेट भएको थियो भन्ने सुनाउँदा–सुनाउँदै ऊ एक छिन सास लिन रोकिई । इन्सपेक्टर बिनोद खड्काले बसिरहेको कुर्सीमै आफ्नो आङ तन्क्यायो र पुलुक्क झ्यालबाट बाहिर हे¥यो । आकाश अलिअलि सिन्दुरे हुन थालेको थियो । रात छर्लङ्गै बितिसकेछ । उसलाई चियाको तलतल लाग्यो । उसले कामिनीलाई भन्यो,
“टी ब्रेक लिऊँ ? बाँकी कुरा त्यसपछि सुनौंला । हुन्छ ?”
कामिनीले सहमति जनाउँदै भनी, “तपाईंले मेरो मुखकै कुरा खोस्नुभयो । मलाई पनि चिया नभइ हुँदैन ।”
इन्सपेक्टर खड्काले उठ्दै भन्यो,
“त्यहाँ तल क्यान्टिन छ । मेरो बिचारमा रातभरि चल्छ । म गएर भनेर आउँछु ।”
कामिनी पनि जुरुक्क उठी र भनी,
“म पनि तपाईंसँगै आउँछु । कुरा पनि हुँदै गर्छ, अलि फ्रेस पनि भइन्छ ।”
दुबै कोठाबाट निस्के । बाहिर करिडरमासर्वेश्वरराज कोइराला कुर्सीमा अप्ठ्यारोसँग निदाइरहेको थियो । बिमलसिंह परियार चनाखो भएर यता र उति गरिरहेको थियो । ऊ बेलाबेला आफ्ना पाखुराका पाँसुलाहरु तन्क्याइरहेको थियो । रामकृष्ण महर्जन अलि पर बिजुलीको प्लग भएको ठाउँमा आफ्नो मोबाइल फोन चार्जमा जोडेर केही गर्दै थियो । खड्काले उसको छेउबाट जानेबेला पुलुक्क आफ्ना आँखा त्यता पु¥यायो । ऊ त्यसमा फेसबुक खेलिरहेको रहेछ । सर्वेश्वर बाहेक सबैले खड्का र कामिनीलाई उत्सुक आँखाले हेरे । बिनोदले भन्यो,
“हामी तल क्यान्टिनमा चिया खान जान लागेको । तपाईंहरुलाई पनि पठाइदिऊँ ?”
रामकृष्णले मौन सहमति सूचक टाउको हल्लायो । बिमलले भन्यो,
“म चिया खान्नँ । मलाई हट लेमन ।”
खड्काले खाउँला जस्तो आँखाले बिमललाई हे¥यो र मनमनै भन्यो,
“कुनै दिन राम्रै हट लेमन खुवाउँछु म तँलाई ।”
क्यान्टिन सुनसान थियो । एकजना मानिस काउण्टर पछाडि उँघिरहेको थियो । ऊ ग्राहकहरु आएको थाहा पाएर चनाखो भयो । खड्काले उसलाई भन्यो,
“भाइ, हामीलाई दुई कप चिया यहाँ । अनि एउटा चिया र हट लेमन माथि आइसियु अगाडि पु¥याइदिनुहुन्छ ?”
त्यो मानिसले आँखा मिच्दै भन्यो, “हस् सर ।” उसले कर्के आँखाले कामिनीलाई पुलुक्क हेर्न पनि भ्यायो । कामिनी र खड्का परपट्टिको टेबलतिर लागे र कुर्सीमा बसे । चिया आएपछि खड्काले कुराकानी अगाडि बढायो,
“त्यसो भए त्यसको भोलिपल्ट तपाईं बिहान साढे सातै बजे भ्रमर भावुकलाई भेट्न एयरपोर्ट पुग्नुभयो ?”
“हजुर । घरबाट त म समयमै निस्केकी थिएँ । तर...” कामिनीले वाक्य अधूरो छोडिदिई । खड्काले उसलाई उत्सुक आँखाले हे¥यो र भन्यो, “तर...?”
इरिक्साको एउटा निश्चित गति हुन्छ । छायालाई त्यस दिनभन्दा अघि त्यसको त्यो मन्द गतिसंग कहिले पनि कुनै गुनासो भएको थिएन । तर आज, उसलाई आफू चढेको हरियो इरिक्सा बयलगाडाको गतिमा गुडिरहेको जस्तो लागिरहेको थियो । आफूलाई हतारो भएको बेला किन संसारका सबै कुराको गति यति सुस्त हुन्छ भन्ने कुरा छायाले कहिले पनि बुझिन । उसको मन त अघि नै उडेर विमानस्थल पुगिसकेको थियो । केही बेरमा उसले रिक्सा चालकलाई मुखै फोरेर भनी,
“दाइ, अलि छिटो कुदाउन मिल्दैन ?”
रिक्सा चालकले पछाडि फर्केर उसलाई हे¥यो र भन्यो,
“यो भन्दा बढी कसरी कुदाउनु ? थोडै मर्सिडिज हो र यो ।”
अनि ऊ आफ्नो जोकमा आफै हाँस्यो । छाया केही बोलिन । केही पर अर्को मानिसले हात दियो । रिक्सा रोकियो । छायालाई त्यो मानिससंग पनि रिस उठ्यो । बेकारमा अझ ढीला गरिदिने भयो उसले । तर रिक्सा चालक वा अरु यात्रुहरुलाई उसको मनस्थिति कसरी थाहा होस् र ? चोकचोकबाट रिक्सामा अट्ने जति सबै यात्रु चढ्दै भरिएपछि मात्र त्यो नरोकिइकन अघि बढिरह्यो । छायाले निश्चिन्तताको सास फेरी । तर उसको त्यो सन्तोक क्षणभरको मात्र हुन पुग्यो । अगाडि गइरहेको एउटा साइकलले बिना कुनै सूचना र संकेत ह्वात्तै दाहिनेतिर काटिदियो । रिक्सा चालक अत्तालियो । उसको मुखबाट निस्क्यो,
“तेरी माँ की........”
अनि उसले स्वतस्फूर्त आफ्नो रिक्साको ह्याण्डल पनि दाहिनेतिर ह्वात्तै काटिदियो । सन्तुलन बिग्रेको रिक्सा सडकमा पाहा पछारिए जसरी पर्लक्क पल्ट्यो र अलिपरसम्म घिस्रिएर अड्यो । रिक्सा पल्टिने बेला त्यसमा भएका पाँचै जनालाई केही थाहा भएन को कसको माथि वा तल थिचियो । एकैछिनसम्म त कसैको चेतले केही काम गरेन । कसैको कुहिनाले कसैको करङ्मा घोचिदिएको थियो, कसैको टाउको कुनै फलाममा ठोकिएको थियो । कसैको गाला गएर पिचरोडमा दर्फरिएको थियो, कसैको नली खुट्टा कतै चेपमा अड्किएको थियो । छायाँलालई आफ्नो टाउकोमा असह्य पीडा भएकोजस्तो लाग्यो ।
आफ्नो कानको छेउबाट अलिअलि मनतातो तरल पदार्थ बगेर घाँटी हुँदै कुमतिर गएको उसलाई थाहा भयो । रंगीबिरंगी ताराहरु उसका आँखाअघि तिरिमिरी नाच्न थाले । उसलाई बिस्तारै उसलाई ती ताराहरु शनैशनैः अँध्यारोमा बिलीन हुँदै गएको जस्तो लाग्न थाल्यो । वरिपरिबाट केही मानिसहरु हल्ला गर्दै त्यतै आएको आवाज उसले सुनी,
“ए ट्याम्पु पल्टियो.......ट्याम्पु पल्टियो ।”
अनि त्यसपछि उसलाई केही पनि थाहा भएन ।
होश आउँदा छायाले आफूलाई अस्पतालमा पाई । छायाको आँखा अस्पतालको छानोमा केन्द्रित थियो । दृष्टि धमिलो थियो । कुनै फोटोग्राफरले लेन्सको फोकस रिंग बिस्तारै घुमाएको जसरी छत स्पष्ट हुँदै आयो । त्यहाँ एउटा ठूलो माउसुली बिस्तारै एउटा सानो कीरातिर लम्किरहेको थियो । कीरा त्यसबाट अनभिज्ञ थियो । अलि नजीक पुगेर माउसुली एकछिन अड्यो अनि बिजुलीको गतिले कीरातिर लम्क्यो । कीराले केही थाहा पाउनुअघि नै माउसुलीले उसलाई आफ्नो मुअमा च्याप्प पारिसकेको थियो । निमेषभरमै कीरालाई माउसुलीले निल्यो । छायालाई आफ्नो टाउकोमा अचानक चिरिक्क गरेर पीडा अनुभव भयो । स्वतः उसको हात त्यही पीडा भएको ठाउँमा पुग्यो । त्यहाँ व्याण्डेज लगाइएको रहेछ । ऊ जिल्ल परी । अस्पताल, पीडा र ब्याण्डेजको कारण उसले अन्दाज लगाउन थाली । बिस्तारै उसको स्मृतिमा आफू बेहोश हुनु अघिका कुराहरु आउन थाले । ऊ घरबाट भ्रमर भावुकलाई भेट्न विमानस्थल जान चढेको इरिक्सा पल्टिएको थियो । अर्थात जनकध्वज विष्टलाई । ऊ झसंग भएर बेडमा उठी र आफ्नो नाडी घडी हेरी । नौ बजिसकेको रहेछ । भ्रमर भावुकको जहाज अझै उडेको छैन । अनि उसका आँखा झ्यालबाट बाहिर डुल्न थाले । तर त्यहाँ त अँध्यारो पो थियो । पारीका घर र ल्याम्पपोष्टका बत्तीहरु बलिरहेका थिए । त्यसको मतलब रातिको नौ पो बजेको रहेछ । हे भगवान, के ऊ दिनभरि अस्पतालमा बेहोश रही ? भ्रमर भावुकले के सोच्यो होला ? उसका लागि कति कु¥यो होला, कतिपटक फोन पनि ग¥यो होला । छायाले आफ्नो खल्तीहरु छामी । फोन फेला परेन । त्यही बेला उसको वार्डको परको ढोकाबाट एउटा मानिस भित्र छि¥यो । मधुरो बत्तीमा उसलाई त्यो मानिस कताकता परिचित लाग्यो । उसको चोट र टाउकोको पीडाले उसलाई उसलाई अचानक भाउन्न भएर आएको जस्तो भयो । फेरि कालो छाउँदै आयो र ऊ बेडमा फेरि ढल्नै लागेकी बेला त्यो मानिस लम्केर उसतिर आयो र उसलाई थाम्यो ।
“बिस्तारै.....बिस्तारै । दिनभरि बेहोश भएर बल्ल बौरिएकी छौ ।”
उसले फेरि बेहोश हुनु अघि हेक्कासम्म गर्न भ्याई, त्यो मानिस भ्रमर भावुक थियो । तर, त्यो कसरी सम्भव हुन सक्थ्यो र ? पक्कै पनि उसलाई चोटको कारण कुनै दृष्टिभ्रम भएको हुनुपर्छ । यसपटक छायाको होश भोलिपल्ट एक बजे खुल्यो ।
भ्रमर भावुक उसको बेडको छेउमा नै थियो । कुर्सीमा बसेर आफ्नो नोटबुकमा केही लेख्दै थियो । उसले छाया ब्यूँतिएकी पनि थाहा पाएन । छाया एकटक उसलाई हेरिरही र उसको त्यहाँ उपस्थितिका बारे अन्दाज लगाइरही । केही बेरमा अचानक भ्रमरले पुलुक्क उसतिर हे¥यो । छायालाई होशमा आइसकेको देखेर मुसुक्क हाँस्यो र भन्यो,
“अहिले कस्तो छ तिमीलाई ?”
छायालाई टाउकोमा पीडा थिएन । उसले मधुरो स्वरमा भनी, “ठीक छु । तर, तपाईं यहाँ कसरी ?”
नोटबुक बन्द गरेर उसले भन्यो,
“तिमीलाई बेहोशीमा यहाँ ल्याएपछि कसैलाई खबर गर्न भनेर उनीहरुले तिम्रो फोन हेरेछन् । त्यसमा पछिल्लो समय धेरै सम्पर्क भएको नम्बर मेरै थियो । म चेक इन भइसकेको थिएँ, प्लेनतिर जाँदै गर्दा तिमीले मलाई बेकारमा गफ दिइछौ भनेर सोच्दै थिएँ । अस्पतालबाट फोन आयो र तिम्रो अवस्थाको बारे जानकारी भयो । म प्लेन छोडेर सीधै यता आएँ ।”
छाया भावुक भई । उसले सोधी,
“अनि मेरो लागि तपाईं दुईदिन देखि यो अन्जान सहरको अस्पतालमा वार्ड रुँगेर बसिरहनुभएको छ ?”
भ्रमर केही नबोली मसुक्क हाँस्यो । छायालाई उसको मुस्कान पहिलोपटक देख्दा ज्यानमारा लागेको थियो । अहिले मायालु पनि लाग्यो । ऊ भ्रमरप्रति कृतज्ञ भई । तर मुखले केही भन्ने शव्दै पाइन । के भनेर आभार प्रकट गर्नु होला ? उसको आँखा पढेझैं भ्रमरले भन्यो,
“धन्यवाद सन्यवाद भन्ने बिचार हो भने त्यसको कुनै आवश्यकता छैन ।”
“के गरेर बिताउनु भयो गति लामो टाइम ?”
आफ्नो नोटबुक र कलम देखाउँदै भ्रमरले भन्यो,
“यी दुई भाइ छँदै थिए नि मेरा साथीहरु । केही नयाँ कविताहरु लेखें ।”
त्यही बेला राउण्डमा डाक्टरहरु आए । उनीहरुले छायाको जाँच गरे । अनि भ्रमरलाई भने,
“अब तपाईं उहाँलाई यहाँबाट लैजान सक्नुहुन्छ ।”
त्यसको एक घण्टामा भ्रमर छायाको कुममा समातेर उसलाई बिस्तारै डो¥याएर अस्पतालबाट बाहिर लैजाँदै थियो । छायाको मनमा दुई दिन अघि फोनमा भनेको कुरा घुमिरहेको थियो । भ्रमरले सोधेको थियो,
“हामीले भेटेको सपना त हैन ?”
“तपाईंलाई के लाग्छ ?“ छायाँले प्रतिप्रश्न तेस्र्याएकी थिई ।
“त्यसो भए, कसरी निक्र्यौल गर्ने त ?”
भ्रमरले भनको थियोे, “एउटै तरिका छ । एक पटक फेरि भेट्ने । अनि ध्यान दिएर एकआर्कालाई हेर्ने । सुन्ने.......एकपटक छोएर हेर्ने ।”
अहिले आफूलाई सहारा दिएको भ्रमरको स्पर्शले आल्हादित छाया सोच्दै थिई, समय टक्क अडिदिए कति जाती हुन्थ्यो होला । उसको टाउकोको चोट त बिसेक हुन थालिसकेको थियो । तर उसको मन घाइते भइसकेको थियो । बाहिर आएर उनीहरु एउटा रिक्सामा बसे । चालकले सोध्यो,
भ्रमरले पुलुक्क छायालाई हे¥यो । उसको आँखामा पनि त्यही प्रश्न थियो शायद,
“अब हामी कहाँ र कता जाँदैछौं ?”
छायाँ नेपाली आफू कसरी भ्रमर भावुकलाई भेटेर कामिनी विष्टमा परिणत भई भन्ने बारेमा इन्सपेक्टर खड्कालाई नालीबेली सुनाउँदै थिई । इन्सपेक्टर खड्कालाई उस बाहेक अझै बाँकी दुईजनाको कुरा त सुन्नै बाँकी थियो । किनभने आइसियुमा अचेत अवस्थामा रहेको रहस्यमयी युवकलाई आफ्नो नातेदार भनेर चार जनाले दावी गरिरहेका थिए । उदेकलाग्दो कुरा त के थियो भने ती चारै जना एक आर्कासंग अपरिचित थिए र उनीहरुको जात नै पनि फरक फरक थियो । त्यसैले उक्त युवक होशमा आएर आफै केही नभनुन्जेल उसको बारे निक्र्यौल गर्ने कुनै अरु उपाय थिएन । छायाँ विष्ट आफ्नो कुरा बताउँदा बताउँदै एकछिन रोकिएकी थिई । दुबै जना चियाको चुस्की लगाइरहे । त्यही बेला क्यान्टिनमा डाक्टर धितालको प्रवेश भयो । ऊ सीधै इन्सपेक्टर खड्का र छायाँ भएकोतर्फ आयो । दुबैले पुलुक्क उसलाई हेरे । डाक्टर धितालले भन्यो, “म माथि गएको थिएँ । तपाईंहरु यहाँ आउनुभएको छ भन्ने थाहा पाएर यतै आएँ ।”
इन्सपेक्टर खड्काले भन्यो, “आउनुस् डाक्टर धिताल । अब त्यो युवकको अवस्था कस्तो छ ?”
कुर्सीमा बस्दै डाक्टर धितालले भन्यो, “स्टेबल छ ।”
“उसलाई कहिले होश आउला त ?”
“त्यो त म ठ्याक्कै कसरी भनूँ र ? तर जे होस्, उसको अवस्था सुधारोन्मुख छ । त्यही नै सबैभन्दा ठूलो कुरो हो ।”
फेरि कोही केही बोलेनन् । डाक्टर धितालले उठ्दै भन्यो, “प्लीज क्यारी अन । म वार्डको चक्कर लगाउन जान्छु ।“
डाक्टर धिताल गएपछि इन्सपेक्टर खड्काले छायाँलाई हेर्दै भन्यो, “इफ यू डोन्ट माइन्ड, तपाईं आफ्नो कथा अलि संक्षेपमा भन्नुहोला । किनभने मलाई अरु दुईजनाको पनि कुरा सुन्न बाँकी छ ।”
छायाँले सहमतिसूचक टाउको हल्लाई । उसले आफ्नो कपमा बाँकी चियालाई एकै घुट्कोमा सकाई । अनि आफ्ना सर्लक्क परेको औंलाले ओठमा लागेको चियालाई पुछी । नचाहँदा नचाहँदै पनि इन्सपेक्टर खड्काले उसको औंला र ओठको सौन्दर्यको पान ग¥यो । बास्तवमै छायाँ अत्यन्त सुन्दर थिई । छायाँ बोल्न थाली ।
भ्रमर भावुक र छायाँ अस्पतालबाट बाहिर सडकमा आइपुगे । गर्मी चिरिक्क बढिसकेको थियो ।
“उफ्, कस्तो गर्मी ।” भ्रमर भावुकले आकाशतिर हेर्दै भन्यो ।
मुसुक्क हाँस्दै छायाँले भनी, “यति गर्मी मै आत्तिनु भयो ? यो त केही होइन । जेठ असारमा त यहाँ दिउँसो सास फेर्न पनि मुश्कील हुन्छ ।”
“त्यसो भए मैले फागुनमा यहाँ आएर राम्रै गरेछु ।” भ्रमरले परबाट आइरहेको एउटा रिक्सालाई हात दियो । रिक्सा उनीहरु नजीकै आएर रोकियो ।
“यो चाहिँ पल्टिँदैन होला नि,” छायाँ हाँसी । भ्रमर पनि हाँस्यो । दुबैजना रिक्सामा बसे । रिक्सा छायाँले बताएको गन्तव्यतिर लाग्यो ।
दुई दिनको लागि नेपालगञ्ज आएको भ्रमर भावुक अर्को पन्ध्र दिन त्यतै बस्यो । ऊ दिनभर छायाँको हेरविचार गथ्र्यो र साँझ झमक्क परेपछि मात्र आफ्नो होटल जान्थ्यो । छायँले आफू ठीक भइसकेको जिद्दी गर्दा पनि उसले पटक्कै सुनेन । ऊ भन्थ्यो,
“म फकीर मान्छे हूँ छायाँ । जहाँ भए पनि के फरक पर्छ र ? काठमाण्डौमा पनि को छ र मलाई मिस गर्ने ?”
अनि छायाँ सोच्थी, अनेकौं असमानता भए पनि उनीहरुको बीच एउटा समानता छ । दुवैको जिन्दगीमा एउटा रिक्तता छ । दुबै एक्ला छन् । के यी दुई एक्ला मानिसहरु एकआर्काका परिपूरक हुन् ? के एकआर्काको जीवनको शून्यतालाई मेटाउनका लागि नै नियतिले उनीहरुलाई भेटाएको हो ? के उनीहरुको कुनै भविष्य छ ? यतिका दिन उनीहरु दिनदिनभर अनेकौं कुराहरु गरेर बिताउँथे । यस्तो लाग्थ्यो उनीहरुको कुरा कसहले पनि संिकंदैन । हरेक विषयमा उनीहरु घण्टौं एक आर्कासंग रमाउन सक्थे । कसैसंग जीवन बिताउन यो भन्दा ठूलो कुरा अरु के हुनसक्छ ? तर छायाँ बेलाबेला सोच्थी, भ्रमर पनि उसको बारेमा त्यही सब सोच्न थालेको छ भन्ने कुराको के निधो थियो र ? उसले मानवताको नाताले मात्र छायाँको सहयोग गरिरहेको भए नि ? अहँ...मानवताको नाताले कोही कसैको लागि आफ्नो सबै कामभन्दा छोडेर विरानो सहरमा यत्तिका दिन कहाँ बस्छ र ? तर जे भए पनि कुरोको चुरोसम्म त नपुगी पनि भएन । त्यस रात भ्रमर गइसकेपछि रातभर आफू दुईका बारे अनेकौं तर्कना गर्दै रात छ्याङ पारेर छायाँ एउटा निर्णयमा पुगी । भ्रमरसंग सस्धा कुरा गर्ने बेला भइसकेको छ । गन्तव्य के हो र कहाँ हो भन्ने थाहा नपाइ अब यो बाटोमा यो भन्दा अघि पाइला सार्नु पछि गएर आफ्नै लागि दुःखदायी हुन सक्थ्यो ।
भ्रमरलाई पनि रातभर आफ्नो होटलको कोठामा निन्द्रा कहाँ लागेको हो र ? ऊ पनि त पछिल्ला केही दिनदेखि छायाँकै बारे मात्र सोच्न थालेको थियो । छायाँ सुन्दर थिई, शिक्षित, सुसंस्कृत थिई । उनीहरुको कुरा मिल्थ्यो । तर के त्यतिमात्र पर्याप्त थियो ? छायाँ उसका कविताहरुको प्रशंसक थिई । तर भ्रमरको आर्थिक अवस्था त्यति धेरै राम्रो थिएन । कविता लेखेर कति नै कमाइ हुन्थ्यो र ? ऊ एक्लो ज्यानलाई त केही फरक पर्दैनथ्यो । तर घरगृहस्थी भनेको जिम्मेवारीको कुरो हो । छायाँले उसलाई प्रेम नै गर्थी भनेपनि त्यस प्रेमका लागि उसलाई आफ्नो अभावको भँड्खालोमा जाक्नु बुद्धिमानी हो ? उसले पनि अब छायाँसंग सबै कुरा स्पष्ट गर्ने बिचार ग¥यो । दुबैजनाले अलगअलग एउटै निर्णय गरे ।
भोलिपल्ट बिहानै चौलिक्काको प्रख्यात हलुवा र पुरी पोको पारेर ऊ छायाँकहाँ पुग्यो । छायाँले मीठो चिया पकाई । दुबै चुपचाप चिया र नास्ताको स्वाद लिइरहे । घाँटी सफा गर्दै भ्रमरले भन्यो,
“छायाँ, मलाई तिमीसंग केही जरुरी कुरा गर्नु छ ।”
“मलाई पनि तपाईंसंग जरुरी कुरा नै गर्नु छ ।”
भ्रमरले पुलुक्क उसलाई हेर्दै भन्यो, “भन न ।”
छायाँले बिना कुनै भूमिका सीधै उसको आँखामा आफ्ना हरिणका जस्ता आँखाहरु भिडाएर सोधी,
“हामी कहाँ जाँदैछौं ?”
भ्रमर अलमलियो । अनि सोध्यो, “तिम्रो प्रश्नको आशय त्यही हो जुन अर्थमा म त्यसलाई बुझिरहेको छु छायाँ ?”
“हो भ्रमरजी ।”
भ्रमर गम्भीर भयो र भन्यो, “हामी कहाँ जाँदैछौं भन्ने कुरा हामी कहाँ जान चाहन्छौ भन्नेमा भर पर्छ होइन र ?”
छायाँले उसको आँखाबाट आफ्नो आँखा नहटाइ भनी, “हो । मलाई थाहा छ म कहाँ जान चाहन्छु । तर तपाईं कहाँ जान चानुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु मेरो लागि महत्वपूर्ण छ । के तपाईंको पनि गन्तव्य त्यही हो ?”
भ्रमरले पनि उसको आँखामा अझ गहिरोसंग हेर्दै भन्यो,
“चाहना, कहिलेकहीं मानिसको अवस्थाले निक्र्यौल गर्छ छायाँ । कहिलेकहीं मानिस आफूले चाहेको गन्तव्यको यात्रामा हिंड्न सक्दैन ।”
“त्यस्तो कुनै यात्रा हुँदैन जहाँ मानिस चाहेर पनि हिंड्न नसकोस् ।”
“हुन्छ छायाँ । संसारका व्यावहारिक पक्षहरु पनि हुन्छन्, जुन बेलाबेला नेल बनेर मानिसको खुट्टामा जेलिन्छन् । यति भारी हुन्छन् ती, मानिस चाहेर पनि एक पाइला चल्न सक्दैन । त्यस्तो बेला के यात्रा, के गन्तव्य ।”
छायाँ उठेर झ्यालतिर गई । बाहिर हेर्दै उसले भनी,
“तपाईं र म अहिले जुन यात्राको कुरा गर्दैछौं, त्यसमा म कुनै त्यस्तो नेल देख्दिनँ जुन तपाईंको वा मेरो खुट्टामा जेलिएको होस् ।”
भ्रमरले सीधै र स्पष्ट कुरा गर्नु आवश्यक ठान्यो । उसले भन्यो,
“मेरो अवस्था मेरो खुट्टाको नेल हो । म तिमीलाई जिन्दगीमा केही दिन सक्दिनँ छायाँ ।”
फरक्क फर्केर उसलाई हेरेर छायाँले सोधी, “साथ त दिन सक्नुहुन्छ नि ? त्यो भन्दा बढी मैले केही चाहेको पनि छैन ।”
“जिन्दगी साथले मात्र चल्दैन छायाँ ।”
“जिन्दगी साथबाहेक अरु केही कुराले चल्दैन ।”
उनीहरुको बीच त्यस बिहान निकै लामो गन्थन भयो । भ्रमरले आफ्नो अवस्थाबारे उससंग खुलेर कुरा ग¥यो । छायाँले उसलाई आश्वस्त बनाई । दुइजना मिलेर जिन्दगीको यात्रालाई सहज र सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ऊ विश्वस्त थिई । उसको दृढ निश्चय र अटल आत्मविश्वासका सामु भ्रमर नतमस्तक भयो । उसलाई पनि बिश्वास भयो, छायाँ नै त्यो केटी हो, जससंग उसले बाँकी जीवन बिताउन सक्छ । छायाँले भनी,
“तपाईंको क्षमतामा मलाई तपाईंलाईभन्दा बढी विश्वास छ । कुनै दिन तपाईंको नाम र ख्याति यो देशको मात्र नभै सारा संसारको सीमासम्म फैलिन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ।”
मायालु आँखाले छायाँलाई हेर्दै भ्रमरले सोध्यो,
“यत्रो विश्वास छ ममाथि ?”
छायाँले सहमतिसूचक टाउको मात्र हल्लाई । भ्रमर बिस्तारै उसको नजीक आयो । उसले छायाँको हात आफ्नो हातमा लियो । उसको स्पर्श प्रेमिल थियो । छायाँलाई हलुका करेन्ट लागेजस्तो भयो । भ्रमरलाई पनि उसको नरम र मुलायम हात आफ्नो हातमा फूलजस्तै लाग्यो । छायाँको आँखामा सपनाहरु तैरिन थाले । भ्रमर ती आँखाको गहिराइमा गोता लगाउन थाल्यो । उनीहरुको बीचको दूरी बिस्तारैबिस्तारै कसरी कम हुँदै गयो भन्ने दुबैलाई थाहा भएन । छायाँ थाँक्रो खोजिरहेको कुनै कमलो रुख जसरी लपक्कै भ्रमरसंग बेरिन पुगी । भ्रमरले उसलाई आफ्नो अंगालोमा समेट्यो । छायाँले जिन्दगीमा कहिले पनि कुनै पनि बेला, कुनै ठाउँमा आफूलाई त्यति सुरक्षित भएको अनुभूति गरेकी थिइन । उसले आँखा चिम्लेर आफ्नो टाउको भ्रमरको छातिमा अड्याइ । उसलाई थाहा थिएन यो सपना हो वा वास्तविकता । उसले मनमनै प्रार्थना गरी,
“हे वागेश्वरी माता, यदि यो सपना नै हो भने बिन्ती मलाई कहिले पनि नब्यूँझाइदिनुहोला ।”
छायाँ नेपाली भावकुतामा बगेर आफ्नो पूरै महाभारत सुनाउन थालेकी थिई । इन्सपेक्टर खड्कालाई उसको प्रेमकथा वा भ्रमर भावुकसंग कसरी उसको घनिष्टता भयो भन्ने कुरामा त्यति खास चासो थिएन । उसले छायाँलाई आफ्नो कुरा छोटकरीमा भन्न आदेश दियो । छायाँले बेलिबिस्तार लगाएपछि उसले संक्षेपमा आफ्नो नोटबुकमा टिपे अनुसार नेपालगञ्जको भेट उनीहरुको प्रेम हुँदै बिवाहमा परिणत भयो । छायाँ जनकसंग काठमाण्डौ आई । एक दिन कुरै कुरामा उसले भ्रमरलाई फेरि भनी,
“मलाई मेरो नाम मन पर्दैन । छायाँ । मलाई यो नाम नकारात्मक लाग्छ ।”
त्यस दिन भ्रमरले उसको नयाँ नाम राखिदियो, कामिनी । कामिनी उसले लेखिरहेको एउटा नयाँ कविताको शीर्षक थियो ।शुरुका केही महीनाहरु एकदमै रमाइलोसंग बिते । कामिनीलाई लाग्थ्यो, जिन्दगी भ्रमर भावुकका कविताहरुसंगै बित्नेछ । तर, प्रेमान्ध उसलाई थाहा नभएको कुरो के थियो भने, कविताले पेटको भोक मेटिंदैन । कविताले मात्र जीवनका व्यावहारिक आवश्यकताहरु पूरा हुन सक्दैन । बिस्तारैबिस्तारै जिन्दगीका थपेडाहरुले उनीहरुको भावुकताको महलको जग हल्लाउन थाल्यो । उसको साधारण जागीरको भरमा जेनतेन गृहस्थीको गुजारा हुन्थ्यो । त्यो पनि धेरै कुराहरुमा सम्झौता गरेर । तै पनि उसले कुनै गुनासो गरेकी थिइन । त्यो उसैले रोजेका काटो थियो । समस्या त त्यस दिन सामुन्ने आयो जुन दिन छायाँलाई थाहा भयो...
भ्रमर भावुक त्यस दिन पनि एउटा कविता सम्मेलनमा गएको थियो । सम्मेलनपछि सुरापानको पनि कार्यक्रम रहेछ । त्यो कुरा कामिनीलाई थाहा थिएन । ऊ एउटा गम्भीर विषयमा भ्रमरसंग छलपल गर्नका लागि कुरिरहेकी थिई । रातको निकै प्रहर बितेपछि मात्र भ्रमर घर आइपुग्यो । दुईजना अरु साहित्यकारहरुको काँधमा सहारा लिएर । उसले भुईँमा खुट्टा नै नटेकिने गरी रक्सी पिएको रहेछ । कामिनीको लागि यो कुरा नौलो थिएन । अक्सर यस्ता कार्यक्रमहरुमा गएर भ्रमर मातेर आउँथ्यो । त्यो कुरामा उनीहरुको ठाकठुक परिसकेको थियो । तर त्यस दिन कामिनीलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो । किनभने उनीहरु दुईजनाको जीवनको एउटा महत्वपूर्ण कुराको फैसला गर्नुपर्ने दिन थियो । पु¥याउन आउने साथीहरु अप्ठ्यारो मान्दै उससंग बिदा भएर गएपछि उसले भ्रमरलाई खाटमा लगेर सुताइदिई । भ्रमर अर्धबहोशीमा बर्बराउन थाल्यो । आफ्ना कविताहरु टुक्राटाक्री सुनाउन सुनाउन थाल्यो । कतिपय शायद उसले नलेखेका र मनमा मात्र भएका पनि थिए । अनि केही बेरमा उसको मन भित्रका भडासहरु निस्कन थाले । आफ्ना हरेक कविता संग्रह विश्वस्तरका भएको दावी गर्दै उसले आफूलाई देवकोटा, भूपि र शेक्सपियरभन्दा कम नभएको दावी गर्न थाल्यो ।
“यो देशमा प्रतिभाको कदर छैन । चाकरी चाप्लूसी र पहुँच नपुगेकोले मैले कुनै पुरस्कार पाइनँ । नत्र मेरा हरेक कृतिले मदन पुरस्कार पाउनु पथ्र्यो बुझ्यौ ? अबको चालीस वर्ष पछि मात्र यिनीहरुले मेरा कविताहरुको महत्व बुझ्नेछन् । तर त्यति बेलासम्म शायद भ्रमर भावुक यो संसारमा हुँदैन । मलाई जब खोज्छन् यिनीहरुले, म माथि कतै बसेर खुच्चिङ् भनिरहेको हुनेछु ।”
कामिनी नरमाइलो मानेर उसलाई हेरिरही । उसलाई आफू एक्लो भएकोजस्तो लाग्यो । निकै बेर बर्बराएर भ्रमर निदायो, घुर्न थाल्यो । कामिनी रातभर निदाउन सकिन । भोलिपल्ट पनि भ्रमर निकै ढीला ब्यूँझियो । उसको टाउको रोटेपिङ जसरी घुमिरहेको थियो । कामिनीले उसलाई कागती पानी बनाएर खान दिई । त्यो खाएर भ्रमर फेरि सुत्यो । कामिनी अफीस जाने बेलासम्म पनि ऊ सुति नै रहेको थियो । दिनभर कामिनीलाई अफीसमा काममा पनि मन लागेन । उसले आधा दिनको विदा मागी र निस्की । तर कहाँ वाने वा के गर्ने भन्ने उसलाई थाहा थिएन । डेरा फर्कन पनि मन थिएन । उसको मनभित्र उठिरहेको बबण्डरले उसलाई सुकेको पतिंगर सरह उडाइरह्यो । असन, इन्द्रचोक, भोटाहिटी, रत्नपार्क र दरवार मार्गतिर ऊ बिना उद्देश्य भौंतारिइरही । साँझ झमक्क परिसकेपछि जाने अरु कुनै ठाउँ नभएर उ, डेरा फर्किई । भ्रमर कतै नगएर कोठामै बसिरहेको रहेछ । भ्रमरले उसलाई सोध्यो,
“किन आज यति ढीला गरेकी ? मलाई पीर परिसकेको थियो । कतिपटक फोन गरें, त्यो पनि उठाइनौ ।”
उसले फोन व्यागबाट निकालेर हेरी । नभन्दै भ्रमरको थुप्रै मिस्ड कलहरु रहेछन् । उसले गम्भीर भएर भनी,
“खै, मैले त सुन्दै सुनिनछु घण्टी ।”
भ्रमरले चिन्तित भावले सोध्यो, “तिमीलाई के भएको छ ? अनुहार पनि मलीन देख्छु ।”
उसले व्यङ्ग्यात्मक स्वरमा भनी, “त्यसले तपाईंलाई के फरक पर्छ र ?”
भ्रमर उसको नजीक आयो र भन्यो, “किन यस्तो कुरा गरिरहेकी ? हिजोको कुरामा अझै रिसाइरहेकी हौ भने, मलाई माफ गर । आइन्दा म त्यसरी रक्सी खान्नँ ।”
केही बेर भ्रमरलाई क्वारक्वार्ती हेरेर कामिनीले भनी, “म डाक्टरकहाँ गएकी थिएँ । हिजो मेरो यूरिन टेष्टको रिजल्ट पनि आयो ।”
भ्रमरले चिन्तित भावमा सोध्यो, “डाक्टर ? यूरिन टेष्ट ? किन ?”
“महीनावारी रोकिएको दुई महीना भएको थियो ।”
भ्रमरले उदेकपूर्ण स्वरमा भन्यो, “साँच्चै ? मलाई किन नभनेकी त ? के भन्छ डाक्टरले ?”
कामिनीले गम्भीर भएर भनी “रिपोर्ट पोजेटिभ आयो ।”
भ्रमरको अनुहारमा प्रसन्नताको धाव धपक्कै बल्यो । उसले केही भन्नु अघि नै कामिनी नै बोली, “यही विषयमा कुरा गर्न म तपाईंलाई कुरिरहेकी थिएँ हिजो । तर ....”
भ्रमरले उसलाई अँगालोको घेरामा बाँधेर आफ्नो नजीक तान्दै भन्यो, “मलाई माफ गर कामिनी । तिमी मलाई यति ठूलो खुसीको खबर सुनाउन कुरिरहेकी थियौ र म भने...”
उसको कुरा काट्दै कामिनीले भनी, “के यो साँच्चै खुसीको कुरा हो त ?”
अलमल्ल परेको भावमा भ्रमरले भन्यो, “यो के भन्दैछौ तिमी ? यो भन्दा बढी खुसीको कुरा अरु के हुनसक्छ हाम्रो लागि अहिले ?”
कामिनीले अनिश्चित भावले भनी, “मलाई थाहा छैन ।”
भ्रमर अझै जिल्ल प¥यो । कामिनी उसको अँगालोबाट फुत्केर खाटमा थ्याच्च बसी । टोलाएर भित्तातिर हेर्दै उसले भनी, “मेरो तलबको भरमा हामी दुईजनालाई बाँच्न धौधौ भइरहेको छ । तपाईँको लेखन आकाशे खेतीजस्तो छ । यस्तो अवस्थामा के हामी आफ्नो सन्तान जन्माउने, पाल्ने, पढाउने, लेखाउने र उसलाई कुनै भविष्य दिने कल्पना गर्न सक्छौं ?”
भ्रमरले ट्वाल्ल परेर उसलाई हेरिरह्यो । यो तीतो वास्तविकताबाट ऊ जति निरपेक्ष रहन खोजेपनि कामिनीको प्रश्नले उसलाई भित्रैसम्म हल्लाइदिएको थियो । आफ्नो आर्थिक हैसियत उदाङ्गो भएर उसको सामु उभिएको थियो । उभिएको मात्र होइन उसलाई हेरेर व्यङ्ग्यात्मक पाराले हाँसिरहेको थियो, हियाइरहेको थियो । भ्रमरले भन्यो,
“सँधै यस्तो हुँदैन । मलाई विश्वास छ हाम्रो दिन पनि फिर्छ । भगवानले कुनै न कुनै बाटो खोल्नेछन् हाम्रा लागि पनि ।”
कामिनी तीखो स्वरमा कराई,
“जिन्दगी तपाईंको कविताजस्तो होइन । गम्भीर हुन सिक्नुस् । हावादारी कुराको भरमा हामी सन्तान जन्माउने योजना बनाउन सक्दैनौं ।”
त्यसदिन उनीहरु दुइजनाको बीचमा पहिलोपटक झगडा प¥यो । भ्रमरले कामिनीलाई आफूले पहिले नै यी सब कुराहरु भनेको हुनाले अहिले आएर उसलाई मात्र दोष लगाएर केही हुन्न भन्ने तर्क ग¥यो । कामिनीले त्यतिबेला आफ्नो मतिभ्रष्ट भएको हुनाले यी सबै कुराहरु देख्न नसकेको ओठे जवाफ फर्काइदिई । वादविवादको कुनै समाधान निस्कने छाँटै भएन । आफ्नो कपाल भुत्ल्याउँदै भ्रमर करायो,
“अब तिमी आफै भन म के गरौं ? बैंक लुट्न जाऊँ ? मूर्ति उखेल्न जाऊँ ? के गरौं म ?”
कामिनीले भनी, “तपाईंले गरेर गरिन्न त्यो पनि । मेरो नियतिमा जे लेखेका छ, त्यसबाट शायद म भाग्न सक्दिनँ । तर अहिलेको लागि एउटा कुरामा चाहिँ कुनै विवाद छैन ।”
कामिनीले दुखी तर दृढ स्वरमा भनी,
“हामी यो बच्चा जन्माउन सक्दैनौं ।”
त्यो कुरामा फेरि उनीहरु विवाद गर्न थाले । भ्रमर भन्थ्यो, परेपछि सब आफै गर्न सक्छि मानिसले । जिम्मेवारी थपिएपछि त्यसलाई बहन गर्ने बाटो नपैल्याइ सुखै छैन । तर कामिनी भन्थी, पानीमा हाम्फालेपटि पौडी खेल्न नसिकी सुखै छैन भनेजस्तो तर्कले जिन्दगी चल्दैन । पौडी खेल्न सिक्नेभन्दा बढी डुब्ने सम्भावना हुन्छ ।
“म यस्तो रिस्क लिन सक्दिनँ । म कवि हैन । दिमागलाई थन्क्याएर मनको लहडमा केही गर्न सक्दिनँ । मैले जीवनमा जेजस्ता अभावहरु भोगकी छु, मेरो सन्तानले पनि त्यही सब भोग्न परोस् भन्ने म चाहन्नँ ।”
जति विवाद गरे पनि एकआर्कालाई आश्वस्त बनाउन दुबैले सकेका थिएनन् । उनीहरु झगडा गरेरै एकआर्कातरि ढाड फर्काएर सुते । रातभरि दुबै निदाउन सकेनन् । भोलिपल्ट बिहान पनि उनीहरु केही बोलेनन् । कामिनी केही नखाइ अफीस गई । उसको कोही थिएन । अफीसमै आफूभन्दा अलि पाको उमेरकी एक महिला सुमति शाक्यसंग उसको अलिअलि हिमचिम थियो । कामिनीले मनको बह उसैसंग पोखी र आफूले गर्न खोजेको कुरा बताई । उसले सुमतिसंग सहयोग मागी । सुमतिले उसलाई एकपटक राम्ररी सोच्ने सल्लाह दिई । त्यस साँझ ऊ डेरामा पुग्दा भ्रमर कोठामा थिएन । राति अबेर आयो, मातेर आयो । मातेको सुरमा उसले कामिनीलाई भन्यो,
“चिन्ता नगर । चाँडै मेरा कविताहरु अँग्रेजीमा अनुवाद हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेपछि तिनले धमाका मच्चाउँछन् । अरु आठ दश भाषामा ती छापिन्छन् । विश्वका चर्चित पुरस्कारहरु पाउँछन् । अनि म पनि मार्खेजजस्तै आधा घण्टा अन्तर्वार्ता दिएको पचासौं हजार डलर चार्ज गर्न थाल्छु । हाम्रो सन्तानलाई भनेकोजस्तो भविष्य दिन सक्छौं ।”
कामिनी सोम शर्माको सातुको कथा सुनीरही । आँखाबाट आँशुहरु बगिरहे । उसको निश्चय झन् झन् दृढ हुँदै गयो । भोलिपल्ट पनि भ्रमर उठ्नु अघि नै ऊ निस्केर हिंडी । उसलाई जहाँ जानु थियो, सुमति शाक्य उसको साथी गइदिई । त्यस साँझ घर फर्किंदा आफुले सही वा गलत के गरें भन्ने उसलाई थाहा थिएन । भ्रमर कोठामै थियो । उसले भ्रमरलाई च्याप्प समाती । अचानक उसको मनको सारा बह बाँध भत्केको नदीको पानी जसरी बग्न थाल्यो । रुँदै उसले भनी
“मैले कोपिला लाग्नु अघि नै उम्रन आँटेको बोटलाई उखेलेर मिल्क्याएदिएँ ।”
केही बेर भ्रमर पत्थर जसरी जडवत भयो । बिस्तारै कामिनीलाई आफूबाट अलग गरेर ऊ केही नबोली कोठाबाट निस्केर गयो ।
आफ्नो कथा सनिरहेको इन्सपेक्टर खड्कालाई हेर्दै कामिनीले आँशु पुछी र भनी,
“त्यसदिन निस्केर गएको उहाँ फेरि फर्केर आउनु भएन । निकै दिन भएपछि मैले पत्रिकामा बिज्ञापन छपाएकी हूँ । उहाँको यो अवस्था कसरी भयो र किन भयो मलाई थाहा छैन । अरुले किन उहाँमाथि आफ्नो नक्कली नाताको दावी गरिरहेका छने भन्ने पनि मलाई थाहा छैन ।”
इन्सपेक्टर खड्का गम्भीर थियो । केस झनै जटिल बन्दै थियो । अब अझै दुईजनाको कुरा सुन्नै बाँकी थियो ।
छायाँ नेपाली अर्थात् कामिनी विष्टले भ्रमर भावुक अर्थात् जनकध्वज विष्टसंग आफ्नो सम्बन्धको बेलीबिस्तार लगाएर गरेको दाबी सुनेर इन्सपेक्टर बिनोद खड्काको दिमाग अझै धेरै रन्थनियो । अब बाँकी थिए, रामकृष्ण महर्जन र बिमलसिंह परियार । महर्जन त्यस युवकलाई आफ्नो भतिजो भन्थ्यो भने परियार भाइ । कोइरालाले छोरा भनेर दावी गरेको युवकलाई विष्ट आफ्नो पति भन्दै थिई । त्यसैले इन्सपेक्टर बिनोद खड्का रनभुल्ल परेको थियो । बाँकी दुईजनामा अब कसको कुरा पहिले सुन्ने भनेर ऊ घोत्लिन थाल्यो । उसको तालीम र अनुभवले खारिएको आँखाले पनि चारजनामा को तीनजना झूट बोलिरहेका छन् भन्ने कुरा पहिल्याउन सकिरहेको थिएन । उसलाई अब थाहा भइसकेको थियो, अघिल्ला दुई सरह बाँकी दुईले पनि ठोस प्रमाणहरु सहित नै आफ्नो कुरा राख्नेछन् । आत्मविश्वास सबैमा बराबर देखिन्थ्यो । कामिनी आफ्ना निर्दोष र मृगकाजस्ता आँखाहरुमा अनुनय विनय भरेर उसलाई हेरेर भन्दैथिई, “मलाई अब तपाईंकै मात्र आसरा छ इन्सपेक्टर साहब । मलाई न्याय दिन तपाईंले मात्रै सक्नुहुन्छ ।”
उसले कामिनीलाई भन्यो, “ठीक छ । तपाईं बाहिर जानुस् र...”
त्यही बेला बिनोद खड्काको फोन थर्थर गरेर काँप्न थाल्यो । उसले हे¥यो, डाक्टर सरोज धितालको नाम पिलिक्पिलिक् गर्दै रहेछ । हतारहतार फोनको हरियो चिन्हलाई औंलाले दायाँतिर सारेर उसले त्यसलाई आफ्नो कानमा टाँस्यो । उसले केही भन्नु अघि नै उताबाट डाक्टर धितालको उत्साहित स्वर आयो, “इन्सपेक्टर साहब, के गर्दैहुनुहुन्छ ?”
खड्काले लामो सास फेर्दै भन्यो, “भर्खर कामिनी विष्टको कुरा सुनेर भ्याएँ । अब दुईजनाको अझै सुन्न बाँकी छ ।”
उत्साहित स्वरमा नै डाक्टरर धितालले भन्यो, “सम्भवतः अब तपाईंलाई त्यसको आवश्यकता नहोला कि ? तपाईं तुरुन्तै यहाँ आइसियुमा आइहाल्नुुस् ।”
“आइसियुमा ? किन डाक्टर साहब ?”
“त्यस युवकलाई होश आइसकेको छ इन्सपेक्टर साहब ।”
इन्सपेक्टर खड्का कुर्सीबाट करेण्ट लागेको जसरी जुरुक्कै उठ्यो । उसको मुखबाट ठूलो स्वरमा निस्क्यो, “ह्वाट् ?”
त्यसको संगसंगै फूर्तिलो चालले ऊ अघि पनि बढिसकेको थियो । उसको वेगले कुर्सी लफण्डिएर पछाडितिर ढल्यो । तर त्यसको वास्ता नगरी ऊ ढोकातिर हान्नियो । उसको यस अप्रत्याशित व्यवहारबाट कामिनी विष्ट हतप्रभ भएर उसलाई हेर्दै थिई । उसले केही सोध्नुअघि नै बिजुलीको फूर्तिले लम्केको इन्सपेक्टर खड्काले ढोका खोलेर एक पाइला बाहिर राख्न भ्याइसकेको थियो । कामिनीले उसको पछि लाग्दै सोधी, “के भयो इन्सपेक्टर साहब ?”
नरोकिइकनै उसले उत्तेजित स्वरमा भन्यो, “त्यो युवकलाई होश आयो रे ।”
उसको स्वर बाहिर बसिरहेका अरु सबैले पनि सुने । उनीहरु सबैमा पनि त्यसको प्रतिकृया त्यस्तै नै हुनु स्वाभाविकै थियो । कतिसम्म त भने कुर्सीमा उँघिरहेको सर्वेश्वरराज कोइराला समेत ब्यूँझियो र पुठ्ठोमा स्प्रिंग जडिएको मान्छे जसरी बुर्लुक्कै उफ्रियो । कसैले केही भन्नु अघि नै बिनोद खड्का आइसियु तिर सत्तरीको गतिको हुइँकिइसकेको थियो । सबै जना उसको पछि त्यतै लम्किए ।
आइसियुको ढोका अगाडि डाक्टर धिताल उभिएको थियो । बिनोदले उसलाई हतारिएको स्वरमा सोध्यो,
“केही भन्यो उसले ?”
डाक्टर धितालले भन्यो, “मैले कसैलाई उससंग कुरा गर्न दिएको छैन । मलाई लाग्यो, यो परिस्थितिमा अरु कसैले भन्दा पहिले तपाईंले नै उससंग कुरा गर्नुपर्छ होला ।”
डाक्टर धितालको यो जिम्मेवार सोचलाई मनमनै सह्राउँदै उसले भन्यो, “यो तपाईंले एकदमै सही गर्नुभयो डाक्टर धिताल ।”
त्यतिबेलासम्म सर्वेश्वरराज कोइराला, कामिनी विष्ट, रामकृष्ण महर्जन र बिमलसिंह परियार पनि त्यहीं नजीकै पुगिसकेका थिए । उनीहरु सबै उत्तेजित स्वरमा एकै पटक भने जसरी कराउन थाले । सबै पहिले आफू भित्र जान पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका थिए । सर्वेश्वर भन्दै थियो, “मैले अहिलेसम्म आफ्नो पावर र पहुँच देखाएको छैन । म आफ्नो औकातमा आउने हो भने यहाँ धेरै कुरा हुन सक्छ । मलाई पुरानो सर्वेश्वरराज कोइराला बन्न बाध्य नबनाउनुस् । मैले भन्द्या छु । त्यसो भयो भने जे हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी मेरो हुनेछैन ।”
कसरत गरेर सुम्लैसुम्ला उठेको आफ्ना बलशाली पाखुराहरु सुर्कँदै बिमलसिंह परियार पनि कुर्लन थाल्यो, “पहुँचको भरमा थिचोमिचो गर्ने त्यो जमाना गइसक्यो । लोकतन्त्र त्यसै ल्याएको हैन यो देशमा । मैले पनि दही जमाएर बसेको छैन हातमा । के ठान्नु भएको छ मलाई ?”
रामकृष्ण महर्जनमात्र के कम र ? ऊ झनै तीखो स्वरमा भन्न थाल्यो,
“काठमाण्डौ हाम्रो हो । हामी सहेर बस्यौं भन्दैमा हामीलाई कायर नसम्झे हुन्छ । परेको बेला आर कि पार गर्नुप¥यो भने हामी पनि रगतको खोला बगाइदिन्छौं बुझ्या हो ?”
कामिनी विष्ट घ्वाँघ्वाँ रुन थाली, “हे वागेश्वरी माता, यहाँ के हुन लागिरहेको छ ? तिमीलाई त सब थाहा छ नि र अब तिम्रै सहारा माता, दूधको दूध पानीको पानी गर्ने तिम्रै जिम्मा । रक्षा गर माता, रक्षा गर ।”
इन्सपेक्टर खड्काले उनीहरुलाई कठोर स्वरमा भन्यो, “तपाईंहरु यहाँ हल्ला गरेर नबस्नुस् । मैले उससंग भेटेर उसको बयान नलिउन्जेल कसैले पनि उसलाई भेट्न पाउँदैन । सभ्य मानिस जसरी बूनुहुन्न भने म तपाईंहरु सबैजनालाई गिरफ्तार गरेर लक अपमा लैजान बेर लगाउन्न ।”
खड्काको दृढ भाव देखेर सबै साम्य भए । एकैछिन उनीहरुलाई हेरेर खड्का आइसियुभित्र छि¥यो । डाक्टर धिताल, अर्को जूनियर डाक्टर र एउटी नर्स त्यहाँ थिए । अनि त्यो रहस्यमयी युवक । उसलाई होश आइसकेको थियो । बेडको माथिल्लो भाग उचालिएको थियो । ऊ तकियामा अडेस लगाएर पल्टिएको थियो । उसको अनुहार भावशून्य थियो । कोठामा नयाँ मानिसको प्रवेशसंगै हुनुपर्ने स्वाभाविक कौतुहलता पनि उसमा भएन । उसका आँखाहरु एकटक अगाडिको भित्तामा केन्द्रित थियो । बिनोद खड्का उसलाई नियाल्दै अघि बढ्यो । नजीकै गएर हेर्दा उसलाई लाग्यो, त्यस युवकका आँखा त भित्ताभन्दा पनि पारी बाहिर अनि पर क्षितिजमा केन्द्रित छन् । खड्काले उसलाई भन्यो,
“मेरो नाम बिनोद खड्का हो । इन्सपेक्टर खड्का । तपाईं यहाँ बेहोशीको अवस्थामा ल्याइनुभएको थियो । तपाईंको पहिचान खुल्ने कुनै कुरा तपाईंसंग थिएन । यहाँ चार थरि भिन्नैभिन्नै मानिसहरु तपाईंमाथि दावी ठोकिरहेका छन् । तपाईंको नाम के हो ?”
त्यस युवकमा उसको कुराको कुनै असर भएकोजस्तो देखिएन । उसको भाव पनि परिवर्तन भएन । ऊ एकटक भित्तामा नै हेरिरह्यो । बिनोदले फेरि प्रयास ग¥यो,
“म तपाईंसंगै कुरा गरिरहेको छु । को हो तपाईं ? यो अवस्थामा कसरी पुग्नुभयो ? परिस्थितिको गम्भीरतालाई कृपया बुझ्ने प्रयास गर्नुस् ।”
तर युवक मौन नै रह्यो । किनोद खड्काले निकै बेर प्रयास गर्दा पनि उसमा कुनै असर भएन । खड्का आजित भएर डाक्टर धितालतिर फक्र्यो र भन्यो, “डाक्टर, यो मानिस किन केही बोल्दैन ?”
डाक्टर धितालले गम्भीर भएर भन्यो, “म कसरी भनूँ ? हामीलाई उसको बारे के थाहा छ र ? हुनसक्ट, ऊ जन्मजात बोल्न सुन्न नसक्ने मानिस हो । हुनसक्छ, टाउकामा लागेको गम्भीर चोटका कारण उसलाई पूर्वविस्मृति भएको छ । अथवा हुनसक्छ कुनै कारणवश जानीजानी ऊ केही बोलिरहेको छैन ।”
खड्काको धैर्यको बाँध फुट्ने बेला भइसकेको थियो । उसले दाह्रा किट्दै भन्यो, “मुसा बिरालोको खेल धेरै भयो । म उसलाई थाना लैजान्छु । जस्तै ज्याद्रा मानिसहरुलाई पनि ट्याउँट्याउँ बोल्ने बनाउने हामीसंग धेरै उपायहरु छन् ।”
डाक्टर धितालले मन्टो हल्लाउँदै भन्यो, आवेशमा नआउनुस् इन्सपेक्टर । ऊ होशमा आएपनि उसको अवस्था अझै पनि नाजुक छ । मानसिक तनाव पनि त्यत्ति नै होला । यस्तो अवस्थामा म पेसेन्टलाई अर्को अस्पतालमा त लैजान दिन सक्दिनँ, प्रहरी थानाको त कुरै नगर्नुस् ।”
इन्सपेक्टरले युवकलाई असहाय भावले हे¥यो । उः अझै त्यसै गरी टोलाएर भित्ता हेरिरहेको थियो। आँखा पनि झिमिक्क नगरी ।
भूपमणि बराल आफ्नो कम्प्यूटरको स्क्रिनलाई ट्वाँ परेर आँखा पनि नझिम्क्याइ हेरिरहेको थियो । त्यहाँ भएका अक्षरहर उसले पढेर सकिसकेको थियो । अझै तल केही छुट्यो कि भनेर उसले स्क्रल पनि गर्न खोज्यो । तर अहँ, अब केही थिएन । भूपमणि बराल, एउटा चर्चित प्रकाशक । केही दिन अघि उसको एमेलमा कुनै चिराग नाम गरेको मानिसले एउटा पाण्डुलिपि पठाएको थियो । हराएको मानिस भन्ने शीर्षक भएको त्यस पाण्डुलिपि दुईचार दिन त उसले खोलेको पनि थिएन । उसको प्रकाशन गृहमा दिनको दुईचारवटा पाण्डुलिपि आउनु नौलो कुरो थिएन । धेरैजसो त ऊ चारपाँच पाना पढेर छोडिदिन्थ्यो । तर चिरागको हराएको मानिस पढ्न शुरु गरेपछि ऊ रोकिएको थिएन । त्यो युवक को थियो भन्ने उसलाई पनि कौतुहलता हुन थालिसकेको थियो । तर पाण्डुलिपि त अधूरो थियो । भूपमणि बराल अलमल्ल प¥यो । त्यही बेला बाहिर रिसेप्सनबाट उसको सहायकले फोन गरेर भन्यो, “सर, कोही मिष्टर चिराग तपाईंलाई भेट्न आउनुभएको छ ।”
“चिराग ?” भूपमणि बरालले विस्मयपूर्ण स्वरमा सोध्यो ।
“हो कुनै पाण्डुलिपि पठाउनुभएको थियो रे, त्यसैको विषयमा सोध्न आउनुभएको रे ।”
“भित्र पठाइदेऊ, तुरुन्तै ।” भूपमणि बरालले आतुर स्वरमा भन्यो ।
चिरागले कफीको चुस्की लगायो । झुसझुस दाह्री जुंगा र लामालामा कपाल थियो उसको । जुँगामा लागेको कफीको फिंज हातैले पुछेर उसले भन्यो,
“कस्तो लाग्यो त तपाईंलाई पाण्डुलिपि ?”
भूपमणि बरालले भन्यो, “इन्ट्रेस्टिंग छ । तर यो त पूरा छैन ।”
“छ पूरा प्रकाशक महोदय ।”
“कहाँ छ पूरा ?”
चोर औंलाले आफ्नो कन्चटमा देखाउँदै चिरागले भन्यो, “यहाँ । मैले तपाईंलाई पूरै नपठाएको हूँ । किनभने पहिले पनि मेरो उपन्यास कसैले आफ्नो नाममा छपाइसकेको छ । म फेरि त्यो गलती दोहो¥याउन चाहन्न । तपाईं यसलाई छाप्न तयार हुनुहुन्छ भने पहिले सम्झौता गर्नुस्, अग्रिम पारिश्रमिक स्वरुप केही रकम भुक्तान गर्नुस्, मेरो नाममा यसको कभर छाप्नुस्, वित्तापन गर्नुस् । अनि मात्र म तपाईंलाई बाँकी भाग दिन्छु ।”
एउटा नयाँ लेखको यत्रो ठूलो माग सुनेर भूपमणि बराल जिल्ल प¥यो । तर चिरागको पाण्डुलिपि र अहिले उसको आँखा पढ्दा उसलाई लागिरहेको थियो, यो रेसको लामो दौड कुद्ने घोडा हो । कहिलेकहीं तत्क्षण गरिएका निर्णयहरु कालान्तरमा निकै महत्वपूर्ण सावित हुन सक्छन् । उसले दृढ स्वरमा भन्यो, “मलाई तपाईंको माग मजूर छ । तर मेरा केही शर्तहरु छन् ।”
“कस्ता शर्त ?”
भूपमणिले भन्यो, “जुन रहस्यमयी युवक छ, तपाईं त्यसलाई युवती बनाएर पुनर्लेखन गर्नुहुनेछ । पाठकलाई एउटी नारी पात्रसंग बढी सहानूभूति हुन्छ । अनि यसको शीर्षक हुनेछ, युवती हराएको सूचना ।”
केही बेर सोचेर चिरागले भन्यो, “डन् । त्यसो गर्दा मैले धेरै कुरा मिलाउनुपर्छ । तर यो कुरा मेरो मनले खायो । म पुनर्लेखन र बाँकी भाग तयार पार्न लाग्छु । मलाई दुई महीना लाग्छ त्यति गर्न । तपाई आफ्नो वचन अनुसार गर्न थाल्नुस् ।”
त्यसदिन त्यहाँबाट निस्कँदा चिरागको खल्तीमा दूई लाख रुपैयाँको चेक थियो । भूपमणि बराल चाहिँ किताबको कभर कस्तो बनाउन पर्ला भनेर सोच्न थालिसकेको थियो ।